News under अपराध
सप्तरी । प्रसिद्ध शक्तिपिठ सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवतीको चोरी भएको मुकुटसहित एक जना पक्राउ परेका छन्। विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का राजेश मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आइतबार साँझ करिब ७ बजे छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रहेको छिन्नमस्ता (शखरेश्वरी) भगवतीको चाँदीको मुकुट, नथिया र टीका चोरी भएको थियो। खोजतलास गर्ने क्रममा गाउँमा लुकेर बसेको...
टिकटकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ट्रोल भिडिओ बनाउने पक्राउ
काठमार्डौै । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ट्रोल भिडिओ पोस्ट गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । फोटो इडिट गरी टिकटकमा ट्रोल बनाई चरित्रहत्या गर्ने नियतले भिडिओ पोस्ट गरेको अभियोगमा झापास्थित मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ६ बस्ने सोमप्रसाद घिमिरे पक्राउ परेका हुन् । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं...
भारत बेच्न लैजाँदै गरेका बालिकालाई बयान फेर्न धम्की दिएरको आरोप
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th July 2021
काठमार्डौ । प्रलोभनमा पारेर भारतको मुम्बई शहरमा बेच्न लैजाँदै गरिएका सात बालिकालाई उद्धारपछि ओरेक नेपालले धम्की दिएर बयान फेर्न लगाएको बालिकाका आफन्तले आरोप लगाएका छन् । गत चैत १७ गते महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका&ndash;८ स्थित धर्मपुरका सात किशोरी एकाएक हराए थिए । यद्यपि भोलिपल्टै भारत बिहारको सितामढीमा भेटिएका ती किशोरी हराएको...
नवलपुर । नवलपरासी बर्दघाट&ndash;सुस्तापूर्व मा मादक पदार्थ सेवन गरेर झगडा गर्दा पाँच महिने बालिकाको हत्या भएको छ ।&nbsp;जिल्लाको देवचुली-६ मिर्तुङमा मादक पदार्थ खाएर भएको पारिवारिक झगडामा परी पाँच महिने बालिकाको ज्यान गएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले शुक्रबार देवचुली&ndash;६ बस्ने कर्णबहादुर सारुले मादक पदार्थ सेवन...
निर्मला हत्याको तीन बर्ष, न्याय अझै अपुरो, कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
धनगढी । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या भएको तीन वर्ष पुगेको छ । तीन वर्षअघि आजकै दिन अथात् १० साउन २०७५ मा निर्मलालाई बलात्कारपछि हत्या भएको शव भोलिपल्ट ९साउन ११ गते० घरनजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो। साथीको घरमा गएका बेला बेपत्ता भएकी निर्मला ११ साउनको बिहान स्थानीय...
राष्ट्र बैंक ह्याक गर्ने चेतावनी, राष्ट्र बैंकको यस्तो आग्रह
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd July 2021
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक सहित नेपालका थप १५ वटा वाणिज्य बैंकको सिस्टम ह्याक गर्ने चेतावनि आएको छ । ह्याकरले केन्द्रिय बैंक तथा अन्य बैंकका अधिकारीलाई ईमेल, म्यासेज तथा फोन गरेर बैंक ह्याक गरी पैसा चोर्ने धम्की आएको हो । ह्यकरले केन्द्रिय बैंकका प्रबक्ता ढकाल र सह प्रबक्ता नारायणप्रसाद पौडेल र...
भरतपुर । जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका-१७ मानसिंह चोक नजिकै रहेको सिमडाँडा खेतको नहरमा एक युवक मृतावस्थामा फेला परेका छन्। उनको टाउकोमा गोली लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीका अनुसार अन्दाजी ३० वर्षका युवक मृतावस्थामा फेला परेका हुन् । उनको टाउकोमा गोली लागेको जस्तो घाउ देखिएको छ। नजिकै गोलीको एउटा...
यी युवा जसले आफै आमालाई नै मारेर खाए
काठमाडौं - स्पेनका एक युवाले आफ्नै आमालाई मारेर खाएको पुष्टि भएको छ। हाल २८ वर्षका अल्बेर्तो सान्सेज गोमेजले सन् २०१९ मा ६६ वर्षकी आमा मारिया सोलेड्याड गोमेजलाई मारेर खाएको पुष्टि भएको हो। अहिले पनि यो क्रूर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। अदालतका अनुसार अल्बेर्तो लागुपदार्थ दुर्व्यसनीमा फसेका व्यक्ति हुन् भने उनमा मानसिक समस्या...
काठमाडौँ &ndash; मानिसको स्वाब सङ्कलन नै नगरी कोभिड&ndash;१९ परीक्षणको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट बनाउने कार्यमा एउटा गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको सुरिया हेल्थकेयर प्रालिका सञ्चालक डा. सिपी श्रीकुमार र मेरिट मल्टी केयर मेडिकल सेन्टर प्रालिका सञ्चालक प्रकाश रायमाझी भन्&zwj;ने चित्रबहादुर रायमाझीसहितको समूह मिलेर उक्त नक्कली कार्य गरी...
जब टेकु प्रहरी कार्यालय पुगेर एक व्यक्तिले भने- ‘भाउजु मारेर आएँ’
काठमाडौं । शनिबार राति ८ बजे टेकुस्थित काठमाडौं प्रहरी कार्यालय सुनसान भइसकेको थियो, एउटा ट्याक्सी बत्ती बाल्दै गेटबाट भित्र छिर्&zwj;यो । ट्याक्सीमा सवार व्यक्ति हतास मनस्थितिमा आउँदै गरेको देखेपछि ड्यूटी अफिसरले रोकेर सोधपुछ गरे । उनले एक वाक्यको जवाफ फर्काए, &lsquo;भाउजु मारेर आएको हुँ ।&rsquo; ड्यूटी अफिसरमार्फत यो खबर काठमाडौं प्रहरी...
१८ वर्षीया किशोरीलाई करणी गरेको आरोपमा नागार्जुनबाट एक व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौं &ndash; १८ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका&ndash;१ घर भएका ३४ वर्षीय वीर बहादुर तामाङलाई बुधबार बेलुकी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नागार्जुन नगरपालिका&ndash;६ फस्कुस्थित टहरामा वीर बहादुरले ती किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा...
रेड नोटिस जारी भएका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी युएईबाट पक्राउ
काठमाडौं । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले युएईबाट पक्राउ गरेको छ । तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका&ndash;४ तीनसल्ले स्थायी बासिन्दा काजीमान पुरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न रहेको आरोप लागेका पुरी फरार भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा खोजी गर्न नेपाल...
काठमाडौँ&ndash; काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा निर्माणाधिन &lsquo;काठमाडौँ भ्यू टावर&rsquo; का ठेकेदारसहितको टोलीले पत्रकार माधवप्रसाद गुरागाइँलाई कुटपिट गरेको छ । गुरागाइँ नेपाल आज डटकमका सञ्चालक तथा सञ्चारकर्मी हुन् । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि निर्माण हुन लागेको टावरको प्रगति विवरण, पेटी ठेकेदार भारतीय नागरिक भ्यालुरुपाली हेमचन्द्रका सामानहरु अरु ठेकेदारहरुलाई प्रयोग गर्न दिएको, हेमचन्दलाई काममा...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी निर्देशक सुष्मा रिजाल रेग्मीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूरमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले बताए । अदालतको आदेशपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा चलान गरिएको उनले बताए । आमाको सम्पत्ति हिनामिना गरेर...
हतियारधारी समूहले आक्रमण गरेपछि जेलबाट एक हजार ८०० कैदी भागे
काठमाडौं । नाइजेरियाको एउटा जेलबाट एक हजार आठ सय कैदीहरु भागेका छन् । पीकअप ट्रक र बस चढेर आएको हतियारधारी समूहले जेलमा आक्रमण गरेपछि कैदीहरु भागेका हुन् । सोमबार विहान दक्षिण&ndash;पूर्वी सहर ओवेरीस्थित जेलको प्रशासनिक भवनमा आक्रमण भएपछि कैदीहरु भागेको प्रहरी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । ३५ जना जेलबाट...
किशोरीलाई जबरजस्ती यौनजन्य कार्य गर्न लगाएको आरोपमा ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । किशोरीहरुलाई जबरजस्ती यौनजन्य कार्य गर्न लगाएको आरोपमा प्रहरीले होटल सञ्चालकसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ गर्नेमा सिन्धुली घर भई माकलबारी बस्ने २४ वर्षका सरगम भन्ने श्याकुमार भट्टराई, १८ वर्षकी मसेली भन्ने सुहाना तामाङ, काठमाडौं जोरपाटीका ५२ वर्षीय प्रकाश ढुंगेल, नुवाकोट घर भई मालबारी बस्ने २१ वर्षीया मिना...
सुंगुर मार्ने झिरले रोपेर हत्या
इटहरी । सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका&ndash;२ मा सोमबार एक जनाको हत्या भएको छ । स्थानीयवासी केशव कार्कीको हत्या भएको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नगेन्द्र कार्कीले बताए । सुतेकै ठाउँमा सुँगुर मार्ने झिरले रोपेर कार्कीको हत्या गरिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । हत्या गरेको आरोपमा छिमेकी जीवनाथ रेग्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । छिमेकीको...
शंखरापुरमा होली खेल्ने क्रममा एसिडले छ्याप्दा ३ घाइते
काठमाडौं । होली खेल्ने क्रममा डेरीमा राखेको एसिड छ्याप्दा तीनजना घाइते भएका छन् । शंखरापुर नगरपालिका&ndash;१ मा होली खेल्ने क्रममा एसिड छ्याप्दा १६ वर्षीया किशोरी र ११ र ९ वर्षका बालक घाइते भएका हुन् । किशोरीको अनुहार र दुवै बालकको हातमा एसिड परेको थियो । उनीहरुको सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा उपचार...
आफ्नै विद्यार्थीलाई बलात्कार गर्न खोज्ने शिक्षक पक्राउ
बझाङ । आफ्नै विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती करणी गर्न खोजेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले एक शिक्षकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जयपृथ्वी नगरपालिका&ndash;६, नौरामा रहेको भवानी माविमा कार्यरत् शिक्षक ३१ वर्षीय जगत सिंंह रहेका छन् । सिंहले कक्षा&ndash;९ मा अध्ययन गर्दै गरेकी गाउँकै १४ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्न खोजेका थिए...
२ किशोरीलाई अपहरण गरी बलात्कार गरेको आरोपमा २ युवक पक्राउ
दाङ । दुईजना किशोरीलाई अपहरण गरी बलात्कार गरेको आरोपमा रुकुम पूर्वमा दुईजना युवक पक्राउ परेका छन् । जिल्लाकै १४ र १५ वर्षका दुई किशोरीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई करणी गरेको आरोपमा रुकुम पूर्वका २३ र १४ वर्षका युवक पक्राउ परेका हुन् । १ गते घरबाट हराएका ती किशोरीहरु ९ दिनसम्म पनि...
भागरथी प्रकरणका अभियुक्त दिनेशले भने- 'बुबा र भाइलाई मार्ने धम्कीपछि अपराध स्वीकारेँ'
महेन्द्रनगर &ndash; बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको घटनामा प्रहरीले सार्वजनिक गरेका अभियुक्त दिनेश भट्टले आफूलाई जवर्जस्ती घटना कबोल गर्न लगाइएको दाबी गरेका छन्। दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ कतोलाकी १७ वर्षीया भागरथीको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा दिपायलस्थित बालसुधार गृहमा रहेका दिनेशले शनिवार आफ्ना बुवासँगको भेटमा आफूले घटना नगराएको बताएका हुन्। दिनेशले घटनामा आफ्नो संलग्नता...
महिलालाई जिउँदै खाल्टोमा पुरेर भारत भागेका थिए डोजर चालक
काठमाडौं &ndash; धादिङको त्रिपुरासुन्दरी&ndash;१, सल्यानटारमा महिलालाई जिउँदै खाल्टोमा पुरेर डोजर चालक भारत भागेको पाइएको छ । जिल्लाको खोल्सी जिपजिपेमा १७ फागुनमा घाँस बोकेर घरतिर फर्किँदै गरेकी ४५ वर्षीया सरस्वती कुमाल खाल्डोमा खसेकी थिइन् । त्यसपछि बाटो खन्दै गरेका डोजर चालक भीमबहादुर बुढाथोकीले उद्दार गर्नु साटो वरिपरीको माटो ल्याएर उनलाई खाल्डोमा पुरिदिएका...
रातमा एकल महिलाको कोठामा प्रवेश गर्ने युवालाई गाउँले कुट्दा मृत्यु, ५ जना पक्राउ
खोटाङ &ndash; खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका&ndash;५ दुर्छिमका खडक भनिने ३४ वर्षीय अजित राईको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यही चैत २ गते राति स्थानीय बासिन्दाको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका राईको उपचारका लागि बाहिर लैजाने क्रममा चैत ३ गते मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्यु भएपछि प्रहरीले...
हनी ट्रयापमा पारी रकम असुली गर्ने दुई महिला पक्राउ
काठमाडौं &ndash; हनी ट्रयापमा फसाएर रकम असुली गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका&ndash;१० घर भई काठमाडौंको घट्टकुलो बस्ने ३७ वर्षीया ललिता भन्ने लालसरी शाही र कपन बस्ने ३७ वर्षीया कल्पना हमाललाई पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार...
उदयपुरमा ८ वर्षीया नातिनी बलात्कार गर्ने हजुरबुबालाई आजीवन कारावासको सजाय
उदयपुर &ndash; जिल्ला अदालत उदयपुरले आफ्नै ८ वर्षीया नातिनीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा ५६ वर्षीया हजुरबुबालाई आजीवन कारावासको सजाय फैसला गरेको छ । बुधबार जिल्ला अदालत उदयपुरका न्यायाधीश माधवप्रसाद सिलवालको इजालासले नातिनी बलात्कारको कसुरमा उनलाई आजीवन कारावाससहित ४० हजार दण्ड जरिवाना गर्ने फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार धनबहादुर कार्कीले बताए । यस्तै कसुरदार पुरुषले...
बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने ३७ वर्षीया महिलालाई तीन वर्ष कैद सजाय
वीरेन्द्रनगर &ndash; बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने वीरेन्द्रनगरकी ३७ वर्षीया महिलालाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले कैद सजायको फैसला गरेको छ । सोमबार जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजालसले ती महिलालाई तीन वर्ष छ महिनाको कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको लेखा शाखामा कार्यरत खेमराज शर्माले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार...
साढे २ किलो युरेनियमसहित चार पक्राउ,नेपालमा युरेनियम बरामद पहिलो घटना
काठमाडौं साढे २ किलो युरेनियमसहित चारजना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बौद्ध क्षेत्रबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । एआईजी हरिबहादुर पालका अनुसार नेपालमा युरेनियम बरामद भएको यो पहिलो घटना हो । बरामद भएको वस्तु प्रशोधन नगरिएको युरेनिययम भएको परीक्षणबाट पुष्टि भएको उनले जानकारी...
दिल्लीमा कोठी चलाउने चमेली नुवाकोटबाट पक्राउ
काठमाडौं &ndash; भारतको नयाँ दिल्लीमा कोठी चलाउँदै आएकी नुवाकोटकी एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले दुप्चेश्वर नगरपालिका&ndash;२ घर भइ नयाँ दिल्लीको जिबी रोड ५६ नम्बरको गल्लीमा कोठी चलाउँदै आएकी ६२ वर्षीया (चमेली) सीता तामाङ भन्ने रूकमाया तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नुवाकोट प्रहरीको सहयोगमा उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको प्रहरी...
लागूऔषधसहित प्रहरी जवान पक्राउ
रौतहट &ndash; लागुऔषधसहित रौतहटबाट दुईजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर सर्लाही दरवन्दी भई ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन सर्लाहीमा कार्यरत प्रहरी जवान रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका ३ गैंडाटार वस्ने ३२ बर्षका कमल धामी र सोही स्थान ३० वर्षीय राजु कुमार रहेका छन् । विषेश सुराकीको आधारमा रौतहट प्रहरीले चन्द्रपुर नगरपालिका...
हत्या आरोपमा ओली पक्षका नेता बाँस्कोटा पक्राउ
काठमाडौं &ndash; नेकपा अलग हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएका मोरङका युवराज बाँस्कोटा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई मोरङको पथरीशनिश्चरे&ndash;१० जिरीखिम्तीका १९ वर्षीय सन्दीप भण्डारीको हत्या अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भण्डारीको &lsquo;शंकास्पद मृत्यु&rsquo; भएको घटनामा एमालेका नेता बाँस्कोटा पक्राउ परेका हुन्। घटनामा संलग्न बाँस्कोटालाई प्रहरीले...
कलंकीबाट २ पाकेटमार महिला पक्राउ
काठमाडौं - प्रहरीले काठमाडौंको कलंकीबाट दुई महिला पाकेटमारलाई पक्राउ गरेको छ । गोंगबु&ndash;११ की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोक लिसंखु घर भई हाल काठमाडौं मनमैजु बस्ने २३ वर्षीय सिर्जना उप्रेती पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग कलंकीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक मिठ्ठु खड्काको नेतृत्वको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो...
भागरथी हत्या आरोपित दिनेश भट्टलाई सुधारगृह पठाउन आदेश
बैतडी &ndash; किशोरी बलात्कार र हत्या गरेको आरोप लागेका बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ चडेपानीका १६ वर्षीय दिनेश भट्टलाई पुर्पक्षका लागि सुधारगृह पठाउन जिल्ला अदालत बैतडीले आदेश दिएको छ । दिनेशमाथि सोही गाउँकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टलाई बलात्कार र हत्या गरेको आरोप लागेको हो । दिनेशलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार अदालत बुझाएको थियो...
वीरगञ्जका २० वर्षीय युवक लागुऔषधसहित काठमाडौंबाट पक्राउ
काठमाडौं -औषधीजन्य लागुऔषधसहित काठमाडौंबाट एक युवक पक्राउ पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पर्सा जिल्ला विरगंज महानगरपालिका वडा नं. १४ घर भएका बर्ष २० का फैयाज राउत गद्धि रहेका छन् । उनलाई काठमाडौंको चन्द्रागिरि न.पा वडा नं. २ नागढुंगा स्थित चेकप्वाईन्टमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरी टोलिले चेकजाँचका क्रममा...
१६९ थान मोबाइलसहित गौरीघाटबाट १ जना पक्राउ
काठमाडौं - भन्सार छली गरी ल्याइएका १६९ थान मोबाइलसहित काठमाडौंबाट १ जना पक्राउ परेका छन् । रामेछाप जिल्ला लिखु गाविस वडा नं ६ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका ७ गौरीघाट संगमचोक बस्ने वर्ष २६ को मिलन श्रेष्ठलाई १६९ थान मोबाइल सहित गौशाला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। श्रेष्ठले डेराको कोठा भित्र अवैध रुपमा...
साइबर ब्युरोको नक्कली पेज बनाउने १८ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं &ndash; साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तु घर भइ रुपन्देही बस्दै आएका १८ वर्षीय प्रज्वल पोखरेल छन् । उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दिएको पक्राउ अनुमतिपछि पक्राउ गरिएको ब्युरोका एसएसपी नविन्द...
विनयजंग बस्नेतको मोबाइलमा सपनाका गोप्य तस्वीर भेटिए,बस्नेतविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा
काठमाडौं - बेवारिसे शव जलाएर चर्चामा आएकी युवती सपना रोका मगरलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका विनयजंग बस्नेतविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट सपनाको गोप्य तस्वीर राखेको पाइएपछि बस्नेतविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका एक अनुसन्धान अधिकृतका...
फरुवा प्रहार गरी पतिकाे हत्या गर्ने २७ वर्षीया महिला पक्राउ
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd February 2021
काठमाडाैँ । फरुवा प्रहार गरी पतिकाे हत्या गर्ने एक महिलालाइ प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । प्रहरीले&nbsp;कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका&ndash;६ भुराकोटकी २७ वर्षीया बसन्ती चौधरीलाई मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको हाे । २९ वर्षीय पति ओमबहादुर चौधरीकाे हत्या गरी आफैंले जानकारी गराएपश्चात ईलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। घटना बारे थप...
काठमाडौं । बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको शव आफन्तले बुझेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीमा शुक्रबार भएको छलफलपछि आफन्तले जिल्ला अस्पताल, बैतडीमा रहेको शव बुझेका हुन् । घटनाको अनुसन्धानमाथि चित्त नबुझेसम्म शव नउठाउने परिवारको अडान थियो । पीडित परिवारका सदस्यसँग समेत अभियुक्त दिनेश भट्टले बलात्कारपछि हत्या...
हत्या भएको १७ औं दिनमा भागरथीको शव बुझ्दै परिवार,आजै दाहसंस्कार गरिने
बैतडी &ndash; बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको आज दाहसंस्कार गरिने भएको छ। भागरथीको मृत्यु भएको १७ औँ दिनमा दाहसंस्कार गर्न लागिएको हो। यसअघि भागरथीका घरपरिवारले दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने र आवश्यक कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। प्रहरीले बुधबार चडेपानीकै एक किशोरलाई आरोपित भन्दै सार्वजनिक गरेको...
बैतडी &ndash; बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash; ७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न रहेका भनिएका अभियुक्त किशोरले बयान फेरेका छन्। बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयमा लिइएको बयानमा अभियुक्त किशोरले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारेका उनका बुवाले जानकारी दिए। बुधबार सार्वजनिक गरिएका किशोरले यसअघि आफूले हत्या मात्रै गरेको बताउँदै आएका थिए।...
काठमाडौँ &ndash; राष्ट्रिय महिला आयोगले बैतडीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संम्लग्नलाई कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीले घटनाको स्थलगत रिपोर्टबाट बनाएको प्रतिवेदन बुझाउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमक्ष यस्तो माग राखेको हो । बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार...
विराटनगर &ndash; बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सफाइ पाएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीको मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । सफाइ पाउने फैसला भएको दुई महिनापछि बिहीबार पूर्ण पाठ आएको हो । पूर्ण पाठ आएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसलाको पुनरावेदनका...
भारतमा पहिलो पटक महिलालाई मृत्युदण्ड दिने तयारी,कसुर के ?
नयाँ दिल्ली &ndash; भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित मथुरा जेलमा फाँसी घर मर्मत गर्न थालिएको छ । स्रोतका अनुसार मृत्युदण्डको सजाय पाएकी एक महिलालाई उक्त जेलमा फाँसी दिने तयारी भएको हो । यद्यपि जेल प्रशासनले भने ती महिलालाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको हो भनेर प्रस्ट रुपमा भनिसकेको छैन । तर मथुरा जेलमा...
भागरथीको हत्या आरोपी किशोर सार्वजनिक: 'एक पिरियड नपढी भागरथीलाई हत्या गर्न बाटो ढुकेर बसेका थिए'
काठमाडौं &ndash; बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टाको हत्या आरोपित किशोरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा प्रहरीले भागरथी भट्टका बलात्कार तथा हत्या आरोपी सार्वजनिक गरेको हो। सम्मेलनमा सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले ती किशोरले हत्या गर्न भागरथीलाई अगाडि नै लवलेक जंगलमा...
भागरथी प्रकरणका आरोपितलाई म्याद थप गर्न अदालत लगिँदै
काठमाडौं &ndash; बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ मा १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रहरीले अदालत लैजाने तयारी गरेको छ । जिल्ला अदालत, बैतडीमा लगेर आरोपी १८ वर्षीय दिनेश भट्टलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि म्याद लिने प्रहरी तयारी छ । भट्टविरुद्ध करणी र ज्यान सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी...
काठमाडौं &ndash; गएको माघ २१ गते बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ की १७ वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अभियुक्तले प्रहरीसमक्ष आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको छ । भागरथीको हत्यामा संलग्न अभियुक्त १६ वर्षीय दिनेश भट्टले आफ्नो अपराध र टाइमलाइनबारे प्रहरीलाई साबिती बयान दिएको छ । स्थानीय सनातम धर्म माविमै कक्षा...
भागरथीको हत्यापछि न्यायका लागि भएको प्रदर्शनमा अग्रपङ्तिमा थिए आरोपी
काठमाडौं - बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्ट २१ माघ बुधबार साँझ घर फर्किइनन् । परिवारले खोजतलासका लागि प्रहरीलाई आग्रह गर्&zwj;यो, स्थानीय पनि खोजीमा निस्किए । बिहीबार उनको शव सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयबाट घर फर्किने सडकबाट ५० मिटर तल झाडीमा भेटियो । भागरथी प्रकरण कञ्चनपुरको निर्मला प्रकरण जस्तो...
भागरथी हत्यामा उनकै विद्यालयका कक्षा ११ मा पढ्ने छात्रको संलग्नता
काठमाडौं &ndash; बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा उनी अध्ययन गर्ने विद्यालयका एक विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययरत दिनेश भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । भागरथी यही विद्यालयको कक्षा १२ मा पढ्थिन र माघ २१ गते बुधबार...
भागरथी हत्या प्रकरणमा शंकास्पद एक पक्राउ,पक्राउ पर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहेको
काठमाडौं- बैतडीको दोगडाकेदार नगरपालिका&ndash;७ की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा एक जना शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडीका एक अधिकृतले बताएअनुसार घटनामा उनको संलग्नता देखिने केही आधार भेटिएको छ । &lsquo;वस्तुस्थितिले संकेत गरेपनि उनले अभियोग स्वीकार गरेका छैनन्&rsquo;, स्रोतले भन्यो, &lsquo;त्यही...
शिक्षक श्रेष्ठको हत्यामा विप्लवसहित ३६ जनाविरूद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यानमुद्दा
काठमाडौं &ndash; मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरण तथा हत्यामा नेत्रविक्रम चन्द &lsquo;विप्लव&rsquo;, खड्गबहादुर विश्वकर्मा &lsquo;प्रकाण्ड&rsquo;सहित ३६ जनाविरूद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले विप्लवसहित ३६ जनालाई अपहरण तथा कर्तव्य ज्यानमुद्दा दर्ता गरेको हो। यसमा पक्राउ परेका एक मात्र प्रतिवादी छन्। मोरङ इञ्चार्ज डिबी सिलवाल भनिने धनबहादुर...
न्यायालयबाट नै अन्याय : 'महिलाले शरीर सुम्पेपछि सिद्धबाबाले करणी गरे'
विराटनगर &ndash; आफूलाई स्त्री र अग्निबाट टाढा रहने बताउँदै आएका विवादास्पद धर्मगुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले सहमतिमा करणी गरेको ठहर जिल्ला अदालत सुनसरीले गरेको छ । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबालाई अदालतले २२ मंसिरमा सफाइ दिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठमा जाहेरवाली महिलाले मोहित भएर शरीर समर्पण...
गुल्मीमा १४ वर्षीया बालिका करणी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
गुल्मी &ndash; गुल्मीमा बालिका जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडानम्बर&ndash;४ म्यालपोखरी बिरौटाकी अन्दाजी १४ वर्षकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मालिका गाउँपालिका वडानम्बर&ndash;४ अर्खाबाङका २९ वर्षका रमेश भन्ने जगतबहादुर रानालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेले...
कक्षाकोठामै विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक पक्राउ
झपा &ndash; विद्यार्थीमाथि कक्षाकोठामै यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक शालिकराम पोखरेल पक्राउ परेका छन् । पीडित बालिकाका तर्फबाट अभिभावक गीता राईले इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा जाहेरी दर्ता गराएसँगै कमल गाउँपालिका&ndash; ३ सहिद धर्मभक्त माविका शिक्षक पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पढाउने क्रममा विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत...
पिसाब गर्न गएकी १४ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार
विराटनगर &ndash; मोरङमा पिसाब गर्न घरबाट निस्कएकी बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेकी छन् । मोरङको जहदा गाँउपालिका&ndash; १ कि १४ वर्षीया बालिकाको सोमबार राति ९ बजे सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ । पिसाब गर्न निस्किएकी बालिका नफर्किएपछि अभिभावकले खोजी गर्दा दुई जनाले जबर्जस्ती मोटरसाइकलमा राखेर लगेको खुलेको थियो । गाउँमा हल्ला...
छोरीलाई गोली हानी घरमा आगो लगाउने बाबु पक्राउ
धनगढी - बैतडीमा गोली हानेर छोरीको हत्या गर्ने बाबु पक्राउ परेका छन्। माइत आएकी छोरीलाई गोली हानेर हत्या गर्ने पुर्चौडी नगरपालिका १० का धनसिँह महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनले माघ २४ गते साँझ भरूवा बन्दुकले हानेर २० वर्षीया छोरी बेलमती महराको...
भागरथी हत्या प्रकरण : स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइयो
बैतडी &ndash; दोगडकादार गाउँपालिका &ndash;७ चडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको &lsquo;भेजाइनल स्वाब&rsquo; काठमाडौँ पठाइएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका गरिएकी उनको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको हो । घटनाको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएकाले स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वाब परीक्षणले...
भागरथीको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन
महेन्द्रनगर - बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गर्दै सोमबार बिहान यहाँ विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । घटनाका दोषी पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै यहाँको बालजागृति कलेजका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन् । विद्यालयबाट घर फर्किरहेकी किशोरी भट्टको...
१७ वर्षीया भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि
कठमाडौं &ndash; बैतडीको दोगडाकेदार नगरपालिका&ndash;७ मा १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल, बैतडीमा गरिएको पोष्टमार्टमबाट भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडी स्रोतका अनुसार पोष्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरुले भट्टको बलात्कार भएको देखिएको बताएका छन् । प्रतिकार गर्दा शरीरका टाउको र हातमा...
भागरथी हत्या प्रकरण : सीआईबीको टोली र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख सुवेदी घटनास्थलतर्फ लागे
काठमाडौं &ndash; बैतडीको दोगडाकेदार&ndash;७ मा भएको हत्याको निरीक्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदी आफैं घटनास्थलतर्फ गएका छन् । चुडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्या अनुसन्धान सुपरीवेक्षणका लागि सुवेदी त्यहाँ पुगेका हुन् । प्रदेश प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मुकेश सिंहका अनुसार सुवेदी आइतबार बिहानै त्यसतर्फ गएका हुन् । घटनाको छानविनका...
आफ्नै बुवाले गरे २० वर्षीया छोरीको गोली हानी हत्या
बैतडी - बैतडीमा गोली हानेर बुवाले छोरीको हत्या गरेका छन्। पुर्चौंडी नगरपालिका&ndash;१० का ६५ वर्षीय धनबहादुर महराले आफ्नी २० वर्षीया छोरी बेलमती महरा धामीलाई भरुवा बन्दुकले गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक जनक धामीले घटनाबारे स्थानीयबाट खबर प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गइरहेको बताए। उनले शनिबार...
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण सम्झाउने बैतडीको अर्को विभत्स घटना
काठमाडौं &ndash; बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका&ndash;७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट सिर्कोटस्थित सनातल धर्म माध्यमिक विद्यालयमा वाणिज्य संकायमा कक्षा १२ मा पढ्थिन् । घरबाट स्कुल पुग्न झण्डै एकघण्टा जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ । यद्यपि स्कुल जाँदा(आउँदा साथीहरु हुन्थे । बुधबार २ बजे पढाइ सकेर उनी स्कुलबाट हिँडिन् । तर, अरु दिनजस्तो उनी घर...
११ केजी गाँजासहित मकवानपुरबाट अटो चालक पक्राउ
काठमाडौँ - मकवानपुरको नेवारपानीस्थित पूर्वपश्चिम लोकमार्गबाट लागूऔषध गाँजासहित एकजना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका २ बस्ने ४१ वर्षीय राजेन्द्रबहादुर दमाइ रहेका छन् । विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको टोलीले उनलाई हेटौंडा उपमहानगरपालीका १९ नेवारपानीस्थित सडकखण्डबाट मंगलबार पक्राउ गरेको हो । मनहरीबाट हेटौंडातर्फ...
सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार १५ हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं &ndash; महोत्तरीबाट सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार १५ हजार घुससहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्प रामनगरका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार श्रवण बस्नेत छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवासस्थित टोलीले उनलाई गौशाला नगरपालिका५ निगौल चोकबाट सोमबार साँझ पक्राउ गरेको हो। घरायसी प्रयोजनका लागि काठ दाउरा लैजान सहजीकरण...
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको लैनचौरबाट कटुवा पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौर घर भई सामाखुसी टाउन प्लानिङ बस्ने २८ वर्षीय कृष्ण चौलागाईं रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका २६ लैनचौर क्षेत्रबाट बुधबार उनलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनको साथबाट एकथान नलकटुवा पेस्तोल र एक थान गोली बरामद भएको...
तरूण दलका कार्यकर्ता सिंहको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं &ndash; नेपाल तरूण दलका बझाङस्थित कार्यकर्ता अमृत सिंहलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्तालाई कारवाही गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ। बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का तरुण दलका स्थानीय नेता २७ वर्षीय सिंहलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले कुटपिट गरी धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या...
आर्थिक अपचलनको आरोपमा विराट मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ
विराटनगर &ndash; फर्जी कर्मचारी देखाएर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले विराट मेडिकल कलेज टंकिशिनवारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । फर्जी कर्मचारी देखाएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा कम्प्युटर शाखाका कर्मचारी राजनारायण चौधरीसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत सुधिरसिंह राठोर पक्राउ परेका हुन् । दुईजनालाई मंगलबार पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले...
डेरामा बस्ने १७ वर्षीया किशोरी बलात्कार प्रयासको आरोपमा घरबेटी पक्राउ
कञ्चनपुर &ndash; डेरामा बस्ने युवतीमाथि बलात्कार आरोपमा घरबेटी पक्राउ परेका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका&ndash;३ भाँसीका पुष्पराज जोशी आफ्नै घरमा डेरामा बस्ने युवती बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । ४८ वर्षीय जोशीमाथि उनकै घरमामा बस्ने १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । पीडित किशोरीको जाहेरीमा जोशीलाई पक्राउ गरिएको...
२७ वर्षीया युवकको खुँडा प्रहार गरी हत्या
धनगढी - बझाङमा धारिलो हतियार खुँडा प्रहार गरी एक जना युवकको हत्या भएको छ। छवीसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ पाटागाउँका २७ वर्षका अमृत सिंहको खुँडा प्रहार गरी हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिए। उनकाअनुसार बन्नीचौर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव सकेर मंगलबार साँझ ८...
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे भाइरल अर्जुन विक
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको अनामनगरमा बच्चा बोकेर रिक्सा चलाइ रहेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि भाइरल भएका कैलालीका अर्जुन विक बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिका २ सानेपानी घर भएका अर्जुनलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी बालिका बलात्कार गरेको जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरिएको कैलालीका एसपी अनुप जबराले बताए । प्रहरीका अनुसार...
पशुपतिनाथ परिसर नजिकै कुटपिट गरी महिलाको हत्या
काठमाडौँ - मोबाइल चोरेको निहुँमा पशुपतिनाथ परिसरस्थित राममन्दिर नजिकै एक महिलाको कुटपिटबाट हत्या भएको छ । राममन्दिर नजिकै बस्दै आएकी बारा श्रीपुरकी बबिता चौधरीको कुटपिट गरी हत्या भएको हो । हत्या आरोपमा बबिताका श्रीमान ३८ वर्षीय रवि चौधरी र नुवाकोट ककनीकी २५ वर्षीय अनु थापालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले पक्राउ...
हत्याको आशंकामा पशुपतिमा जलाइँदै गरिएको शव प्रहरीद्वारा बरामद,श्रीमानसहित दुई पक्राउ
काठमाडौं &ndash; हत्यापछि सुटुक्क अन्त्येष्टि गर्न लागिएको आशंकामा प्रहरीले पशुपति मन्दिर परिसरको राम मन्दिर नजिकबाट सोमबार एकजना महिलाको शव बरामद गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, गौशालाका डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार घटना शंकास्पद देखिएपछि अनुसन्धानका लागि बाराको श्रीपुर घर भएकी ३५ वर्षीया बबिता चौधरीको शव बरामद गरिएको हो । बरामद शवलाई...
पौने ३ करोड ठगी मुद्दामा ओलम्पिया वर्ल्ड स्कुलका सञ्चालक पक्राउ
काठमाडौं &ndash; पौने ३ करोड ठगीको मुद्दामा ओलम्पिया वर्ल्ड स्कुलका सञ्चालकद्धय पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले स्कुलका सञ्चालकद्धय शिरिष खड्का र सुरेन्द्र महर्जनलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो । ठगी मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको वारेन्टका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको परिसरका प्रमुख अशोक सिंहले जानकारी दिए । अन्य चार सञ्चालक...
सर्लाही &ndash; सर्लाहीको कविलासीबाट प्रहरीले हतियारसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका&ndash;८ का ५० वर्षीय अरुण मिश्र रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले जानकारी दिए । मिश्रलाई कविलासी नगरपालिका&ndash;१० चमेलीमाईबाट हतियारसहित पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले जानकारी दिए । &lsquo;उनको साथबाट...
पूर्व पत्नीलाई आफूबीचका अश्लील भिडियो पठाएर ब्ल्याकमेलिङ
काठमाडौँ - पूर्व पत्नीलाई दुई जनाबीचको अश्लील भिडियो पठाएर ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले सल्यानको कुमख गाउँपालिका ४ सेराडाडा बस्ने ३६ वर्षीय रमेश शाही भन्ने रवि शाहिलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरुबीच एक वर्षअघि डिभोर्स भएको थियो। ब्युरोका प्रमुख नविन्द अर्यालका अनुसार शाहीले आफ्नै फेसबुक अकाउन्ट...
३५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि लम्बोदर न्यौपाने कारागार चलान
काठमाडौं &ndash; नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत भक्तपुरले न्यौपानेसँग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दा न्यौपानेले तिर्न नसक्ने बताएपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो। उनीसँगै पक्राउ परेका दुईजना भने धरौटी तिरेर छुटेका छन्। सोही कलेजका पूर्वलेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठ १० लाख र पोखरा विश्वविद्यालय...
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बाँकेमा कार्यरत सहायक सूचकको हत्या भएको छ। २७ वर्षीय प्रवीण थापाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुवास खड्काले बताए। गत शुक्रबार सवा बिहान १० बजे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १८ सूर्यगाउँमा स्थानीयले शव फेला पारेको थियो। मृतकको सुरूमा पहिचान खुलेको थिएन। अनुसन्धानको क्रममा सोही ठाउँका...
जग्गाधनीलाई थाहै नदिई तीन कट्ठा जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री
सुर्खेत &ndash; जग्गा कित्ताकाट हुँदा वा किनबेच गरिँदा जग्गाधनी र जग्गा किन्ने व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दछ तर मालपोत र नापी कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी, जग्गा बिचौलियाको मिलेमतोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका&ndash;६ का सौगात रावतको जग्गा थाहै नदिई कित्ताकाट गरी बिक्री गरेको पाइएको छ । वीरेन्द्रनगर...
मुद्दा मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर ९० हजार माग्ने घलान स्वयम्भुबाट पक्राउ
काठमाडौं - मुद्दा मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर ९० हजार रुपैयाँ मागेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको टिष्टुङ पालुङ नगरपालिका &ndash;१२ का ३९ वर्षीय चन्द्र लामा भन्ने बुद्धिवहादुर घलान रहेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी प्रमेश विष्टका अनुसार महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तथा महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको...
मेचीनगरबाट ब्राउन सुगरसहित श्रीमान–श्रीमती पक्राउ
काठमाडौं &ndash; झापाको मेचीनगरबाट लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित श्रीमान-श्रीमती पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा झापा मेचीनगर नगरपालिका १ बाहुनडाँगी बस्ने २१ वर्षीय सुजन राजपुत र उनकी १८ वर्षीय श्रीमती पुजा राजपुत (मगर) रहेका छन् । मेचीनगर नगरपालिका १३ चारआली बजारबाट दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको झापाका प्रहरी नायव उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिए...
यौन हिँसाको आरोपमा आरआर क्याम्पसका प्राध्यापक आचार्य पक्राउ
काठमाडौं - काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा रहेको रत्न राज्य लक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसका एकजना प्राध्यापक पक्राउ परेका छन् । आरआर क्याम्पसका प्राध्यापक ४५ वर्षीय विष्णुप्रसाद आचार्य पक्राउ परेका हुन् । आरआर क्याम्पसमा अध्ययनरत एक छात्रालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत यौन हिँसा गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई कलेजबाटै सोमबार पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी...
टोखा हत्या प्रकरण : दुई महिनाकी गर्भवती थिइन् सुदीक्षा, उमेशले अस्पतालमा लिंग जँचाएका थिए
काठमाडौं &ndash; टोखाको ग्रान्डी भिल्लामा मृत फेला परेका दम्पतीको करिब १२ घण्टाको फरकमा ज्यान गएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ। शुक्रबार राति उमेश केसी र सुदीक्षा गिरीको शव फेला परेको थियो। उमेश ओछ्यानमा थिए भने सुदीक्षा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। यो हत्या&ndash;आत्महत्याको घटनामा नयाँनयाँ रहस्य बाहिरिने क्रम जारी छ। उमेशको मृत्यु बुधबार राति...
३० तोला सुन लुटपाट प्रकरणमा प्रहरी भूमिकाबारे छानविन गर्न बन्यो समिति
काठमाडौं &ndash; सामाखुशीबाट १० पुसमा लुटिएको दाबी गरिएको ३० तोला सुन प्रकरणमा प्रहरीको भूमिकामाथि छानविन गर्न समिति बनेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भोलाराज रावलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिमा काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी प्रमेश विष्ट र अपराध महाशाखाका डीएसपी निशान थापा सदस्य...
बुढानिलकण्ठमा केटीकाबारे विवाद हुँदा आफ्नै साथीले चक्कु प्रहार गरी २१ वर्षीय सुशीलको हत्या
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंमा चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले मकवानपुर थाहा नगरपालिका ६ घर भई बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ११ रुद्रेश्वर चोक बस्ने २१ वर्षीय राजसिंह ठकुरीलाई पक्राउ गरेको छ। परिसर प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) प्रमेश विष्टका अनुसार उनलाई सोमबार बिहान चितवनबाट पक्राउ गरी...
टोखा हत्याकाण्ड : शव देखेको १४ घन्टासम्म प्रहरीलाई नभन्दा घटना रहस्यमय
काठमाडौं &ndash; दसैँ मनाउन अमेरिकाबाट नेपाल आएका ललितपुरका आईटी प्राविधिक उमेश केसी आगामी बिहीबार अमेरिका फर्किदै थिए । अघिल्लो साता कुनै अप्रिय घटना नभएको भए उनी अमेरिका जाने तयारीमा हुन्थे । बिहीबार अमेरिका फर्कने टिकट हातमा लिएका केसीको मृत शरीर फेला परेको छ । अष्टमीबाट टोखा नगरपालिका&ndash;३ मा रहेको ग्रिनभिला हाउजिङमा...
श्रीमानको हत्या गरेको १२ घण्टा पछि श्रीमतिद्वारा आत्महत्या, टोखा हत्याकाण्डको पोष्टमार्टम रिर्पोट
काठमाडौँ । टोखा हत्याकाण्डमा भेटिएका दुई शवको पोष्टमार्टमको रिर्पोटमा हत्यापछि आत्महत्या नै गरेको हुनसक्ने देखिएको छ ।&nbsp; श्रीमान उमेश केसीको हत्यापछि श्रीमतिले आत्महत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । अनुसन्धानलाई पुष्टि गर्ने गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भएको पोष्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकले प्रारम्भिक विवरण प्रहरीलाई दिएका छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरको प्रहरी...
कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गर्न गएकी महिलाको आश्चर्यजनक तौरमा मृत्यु
काठमाडौ । दोलखाको कालिञ्चोक भगवती मन्दिरमा दर्शनका लागि आएकी एक महिलाको मृ&rsquo;त्यु भएको छ । दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कालिञ्चोकमा दर्शन गर्न आएकी मकवानपुर जिल्ला फापरबारीकी ३३ वर्षीया सम्झना रोका मगरको २५ गते मृ&rsquo;त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । दर्शन गर्न कालिञ्चोकको कुरीबजार पुगेको र सामान्य बिरामी भई मन्दिर...
बारामा प्रहरी र गाँजा तस्करबीच गोली हानाहान
वीरगञ्ज &ndash; बारामा प्रहरी र गाँजा तस्करबीच गोली हानाहान भएको छ । बाराको निजगढ नगरपालिका( १३ भक्तलाल खोलाको बगरमा प्रहरी र गाँजा तस्कर समूहबीच गोली हानाहान भएको हो । ८&divide;१० जनाको समूहमा रहेका लागुऔषध तस्करहरुले प्रहरीलाई देख्ने वित्तिकै गोली फायर गरेको थियो । प्रतिकारमा प्रहरी टोलीले चाइनिज पेस्तोलबाट ५ राउन्ड हवाई...
काठमाडौं &ndash; नुवाकोट घर भई ललितपुरको च्यासलमा बस्ने धनकुमारी ठकुरीको घरमा दिउँसै लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा उदयपुर घर भै हाल ललितपुरको च्यासल बस्ने २६ वर्षीय भरत मगर, ताप्लेजुङको घर भइ ललितपुरको लगनखेल बस्ने २८ वर्षीया निर्मला राई, ललितपुरको भारदेब&ndash;२ घर भई हाल लगनखेल...
तिलगंगाबाट चिनियाँ नागरिकलाई अपहरण गर्ने ४ जना पक्राउ
काठमाडौं &ndash; प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा दुईजना चिनियाँ नागरिकसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चीनको सान्दोङ्ग छिन्दिय घर भइ ठमेल बस्ने राहदानी नम्बर ईबी ७८४९४२८५ वाहक वु चाओ, चीनको आङ्गखोई उहु घर भइ ठमेल बस्ने राहदानी नम्बर ईओ ९८०९६३६ भएका झाङ विई, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका माइला...
५ वर्षीया बालिका बलात्कारको आरोपमा एक युवक पक्राउ
सुर्खेत &ndash; बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा दैलेखमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । नारायण नगरपालिका&ndash;८ की ५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ३५ वर्षीय रामबहादुर बिक पक्राउ परेका हुन् । घरमा कोही नभएको अवस्थामा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख डीएसपी अनुपम...
काठमाडौं &ndash; धारिलो हतियार कैँची प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरेको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका १६ बाइपास ओरालो बस्ने भारतको मोतिहारी घर भएका २५ वर्षीय सुवोध मियाँ रहेका छन् । मंगलबार राति सुवोधले कैँची प्रहार गर्दा भारतको मोतिहारी घर भएका २५ वर्षीय कलाम मियाँ...
झन्डै साढे ३ लाख रकमसहित १५ जुवाडे पक्राउ
दाङ &ndash; दाङको तुलसीपुरबाट करिब साढे ३ लाख रकमसहित १५ जुवाडे पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ३७ वर्षीय ओमकार वली, ४२ वर्षीय ज्ञानबहादुर डाँगी, ३७ वर्षीय नरबहादुर डाँगी, ४६ वर्षीय तिले बस्नेत, २७ वर्षीय डम्मर केसी, ४१ वर्षीय पूर्णबहादुर डाँगी, ५२ वर्षीय थलबहादुर बुढाथोकी, ३७ वर्षीय खुमनसिंह वली, ३७ वर्षकै रामरोषण...
कोटेश्वरमा पेस्तोल भेटियो,पेस्तोल धनी भन्ने खुल्न सकेन् !
काठमाडौं &ndash; आइतबार एकाबिहानै कोटेश्वर चोकमा एउटा कटुवा पेस्तोल देखियो । पेस्तोल देख्नेवित्तिकै हिँडिरहेका केही व्यक्तिले तुरुन्तै नजिकै रहेका प्रहरीलाई खबर गरे । महानगरीय प्रहरी प्रभाग, कोटेश्वरको टोलीले तुरुन्तै पेस्तोल र त्यसमा रहेको एक राउण्ड गोली बरामद गर्यो । पेस्तोल धनी को हुन् भन्ने खुलेन ।बरु सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिका घर...
नाइजरमा स्लामिक स्टेटको आक्रमणबाट ७९ जना सर्वसाधारणको मृत्यु
काठमाडौं - पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजरमा संदिग्ध इस्लामिक चरमपन्थीको आक्रमणबाट ७९ जनाको मृत्यु भएको छ । मालीसँग सीमा जोडिएका दुई वटा गाउँमा आक्रमण भएको हो । चोमोबांगोउ गाउँमा ४९ जना र जारोमदरय गाउँमा ३० जना मारिएको बीबीसीले लेखेको छ । चोमोबांगोउ गाउँमा सन् २०१७ देखि संकटकाल लगाइएको छ । हालका केही महिनामा...
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी ढकाललाई दुई लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
काठमाडौं &ndash; विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाम गरेको अभियोग लागेकी उमाकुमारी ढकाललाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थुनछेक बहसपछि आज उक्त धरौटी लिएर छाडने आदेश जारी गरेको विशेष अदालतका...
काठमाडौं &ndash; भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेतलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गाली, गलौज र अभद्र टिप्पणी गरेको अभियोगमा एकजना पूर्वप्रहरी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा प्रहरीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका सहायक निरीक्षक (असई) डिल्लीबहादुर चन्द छन् । साइबर ब्युरोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेसँग समन्वय गरेर नेपालगञ्जबाट चन्दलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध...
बौद्ध प्रहरीको अप्रेसन : ६१ तोला सुन, झण्डै ६ लाख नगदसहित लागु औषध तथा चोरीमा संलग्न पक्राउ
काठमाडौ &ndash; काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध तथा चोरीमा संलग्न ७ जना पक्राउ परेका छन् । बौद्ध प्रहरीको टोलीले चोरी तथा लागु औषधमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका ६ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट अभियुक्तहरु पक्राउ परेका हुन । पक्राउ परेकाहरुबाट ६१ तोला सुन,३ तोला सुन जस्तो...
काठमाडौं - संखुवासभामा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह र नेपाल प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको छ । विशेष सुराकीका आधारमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखुवासभाको टोली चैनपुर&ndash;४, मैदानेमा पुगेपछि समूहका कार्यकर्ताले प्रहरीलाई लक्षित गरेर फायर खोलेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको हो । विप्लव समूहका कार्यकर्ताले ५ राउण्ड फायरिङ गरेका...
अवैध बिङ्गोले धेरैको घरबार उधाङ्गो,बौद्ध क्षेत्रका होटल तथा रेष्टुरामा भने छ्याप्प छ्याप्ती
काठमाडौँ &ndash; बौद्ध क्षेत्र अवैध बिङ्गो नामक जुवाको आखडा बन्दै गएको छ । बौद्ध प्रहरी विटबाट करिव ३/४ सय मिटरको दुरिमा रहेका अधिकांश होटल तथा रेस्टुराँमा वन टु थ्री...&lsquo; भनेको सानो स्पिकरमा सुनिन्छ । अधिकांश जुवा खेलाउने होटलहरुमा खासै ग्राहक भेटिदैनन् । तर त्यहाँ भेटिएका प्राय सबै जना एउटा टेबलको वरिपरी...
युवतीलाई लिफ्ट दिँदा ६ लाख लुटियो
काठमाडौं &ndash; युवतीको प्रयोग गरी लुटपाट गर्ने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दोलखाका लालबहादुर श्रेष्ठलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले बुधबार पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठको समूहले गत ८ साउनमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका&ndash; २ बस्ने भोलाबहादुर जर्घामगरलाई युवती प्रयोग गरी लुटेको थियो । भोला रत्नपार्कबाट कलंकी जान मोटरसाइकलमा बसिरहेको समयमा एक युवतीले...
उपमेयरको घरको शौचालयमा मुख बाँधिएको अवस्थामा १४ वर्षीया बालिका फेला
जनकपुर &ndash; महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिकाकी उपमेयर रमिता प्रधानको घरको शौचालयमा मुख बाँधिएको अवस्थामा १४ वर्षीया बालिका फेला परेको घटना सार्वजनिक भएको छ । घटना बुधबारको हो । बुधबार साँझ करिव साढे छ बजेबाट बेपत्ता भएकी ती बालिकालाई प्रहरीको सहयोगमा २ घन्टापछि विनोद गामीको घरको शौचालयमा मुखमा कपडा कोचिएको अवस्थामा भेट्टाइएको...
टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला
डोटी &mdash; टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको हो । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व...
९ जनाको हत्या अभियोगमा 'ट्विटर किलर’ लाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो
काठमाडौँ - जापानको एक अदालतले &lsquo;ट्विटर किलर&rsquo; को नामले चिनिएका ताकाहिरो शिराइसीलाई मंगलबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । ट्विटरबाट सम्पर्क गरी ९ जनाको हत्या गरेको आरोपमा सन् २०१७ मा पक्राउ परेका ३० वर्षीय शिराइसोलाई मंगलबार टोक्यो जिल्ला अदालतको ताचिकावा इजलासले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । न्यायाधीश नोकुनी यानाले ९ जनाको हत्याका...
८ सय ६७ ग्राम यार्सागुम्बासहित गोकर्णेश्वरबाट ४ जना पक्राउ
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको गोकर्णेश्वरबाट यार्सागुम्बा सहित चार जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६ नारायणटारस्थित लामा पेट्रोल पम्प नजिकैबाट चार जनालाई शनिबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जोरपाटी बस्ने २४ वर्षीय विशाल परियार, माकलबारी बस्ने ५९ वर्षीय सुनिल तामाङ, सुकेधारा बस्ने ५५ वर्षीय शेरबहादुर थापा र बुढानिलकण्ठ बस्ने २२ वर्षीय हिमाल...
मोरङ &ndash; मोरङमा २१ वर्षीया युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको घटनामा मिलापत्र गराएको आरोपमा ६ जना पक्राउ परेका छन् । घटनामा पीडित पक्षलाई नगद ५ लाख रुपैयाँ दिई मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा धनपालथान गाउँपालिका &ndash;५ बस्ने ६५ वर्षीय धनेशु खवास, ५३ वर्षीय सुधार सिंह खवास, ६२ वर्षीय मागन खवास, ६२...
व्यवसायी लामामाथि आक्रमण गर्ने नेकपा नेताका छोरासहित तीन पक्राउ
झापा &ndash; गत कात्तिक २८ गते उर्लाबारी ९ दुर्गापुरीका व्यवसायी इन्द्र लामामाथि सांघातिक हमला गर्ने समूहका तीन जना पक्राउ परेका छन्। घटनालगत्तै उनीहरू पक्राउ परे पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको दबाबमा केही घण्टापछि छुटेका थिए। व्यवसायी लामा साथीहरूसँग आफ्नै काष्ठ मिलमा खानपिन गरिरहेका बेला आक्रमणमा परेका थिए। उर्लाबारी ८का प्रज्वल गौतम नेतृत्वको...
खसी नदिएको झोकमा विप्लव समुहले ग¥यो शिक्षक श्रेष्ठको निर्ममता पूर्वक हत्या
काठमाडौं &ndash; मृतक राजेन्द्र श्रेष्ठकी पत्नी धनकुमारी श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै एक स्थानीयले बताएअनुसार आइतबार साँझ साग टिपेर फर्कंदै गर्दा बारीबाट नचिनेका दुईजना भाग्दै थिए। को हो भन्दै उनीहरूतिर लाइट बाल्दा &lsquo;निभा&rsquo; भनेर हकारे। घरदेखि अलि पर कात्तिके भन्ने ठाउँमा श्रेष्ठको बाख्राको खोर छ। &lsquo;उहाँ (राजेन्द्र श्रेष्ठ)ले बिहान बाख्रालाई घाँसपात र...
१६ वर्षीया किशोरी बलात्कारको आरोपमा ललितपुरका एक युवक पक्राउ
काठमाडौं &ndash; ललितपुरमा १६ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा महालक्ष्मी नगरपालिका ८ लुभु टाउन प्लानिङ बस्ने २१ वर्षीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । श्रीकृष्णले ती किशोरीलाई ललाई फकाई पटकपटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएको उजुरीको आधारमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग लुभुबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई बुधबार...
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने कानुन बन्यो
मुम्बई &ndash; भारतको महाराष्ट्र राज्यले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने व्यवस्था भएको कानुन भएको छ। त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्ले सो व्यवस्थासम्बन्धी कानुनलाई पेस गर्ने मञ्जुरी दिएको छ। यसैगरी उसले एसिड आक्रमण पीडितलाई १० लाखको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान पनि विधयेकको मस्यौदामा समावेश गरेको छ। राज्यका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सरकारले बलात्कार, एसिड आक्रमण लगायतका महिलाहिंसामा दोषीलाई...
शिक्षक श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगको माग
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका&ndash;१ मा विप्लव समूहले गरेको शिक्षक हत्याको विरोध गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई विचार आस्था र आशंकाको आधारमा स्वेच्छाचारी रुपमा पक्राउ गर्ने र यातना दिने कार्य नगर्न विप्लव समूहलाई आग्रह गर्दै...
शिक्षकको हत्यापछि विप्लव समुहले भन्यो-'हतियार लिएर आक्रमण गर्न आइलागेकाले ‘प्रतिकारमा मारिए’
विराटनगर &mdash; उत्तरी मोरङको पहाडी बस्तीमा मंगलबार एक प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हत्या भएको छ । घटनाको जिम्मा लिँदै नेत्रविक्रम चन्द समूहले प्रतिकारमा मृत्यु भएको दाबी गरेको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका&ndash;१ रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ५४ वर्षीय राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको हो । मंगलबार साँझ चन्द समूहको मेची&ndash;कोसी...
विप्लव समूहद्वारा शिक्षक क्षेष्ठको घाँटी रेटी हत्या,पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेको आरोप
काठमाडौं - प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहले हत्या गरेका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको शव विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लगिएको छ । मंगलबार मोरङको मिक्लाजुङस्थित आफ्नै घरबाट अपहरण गरेर घाँटी रेटी हत्या गरिएका शिक्षक श्रेष्ठको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि धरान पठाइएको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताए । उनका अनुसार सुरुमा...
विप्लव समुहद्धरा शिक्षक श्रेष्ठको गोली हानी हत्या, वडाध्यक्ष भन्छन्-अपहरणको खबर सुन्दासम्म गोली हानेर मारिसकेछन्’
काठमाडौं &ndash; मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका १ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मंगलबार बिहान ६ जनाको समूहमा आएका विप्लव समूहका कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थिए। वडाध्यक्ष नरबहादुर राईका अनुसार उनलाई बिहान ६ बजे घरबाट लगिएको थियो। राईले यो खबर ८ बजेमात्रै थाहा पाएका थिए। &lsquo;मलाई पनि एक जना भाइले अपहरण भएछ भनी...
विप्लवका कार्यकर्ताले सुराकीको आरोपमा शिक्षकको हत्या गरेको सूचना आएको छ : प्रहरी
विराटनगर &ndash; मोरङको मिक्लाजुङमा विप्लव समूहविरुद्ध सुराकी गरेको आरोपमा शिक्षकको हत्या भएको प्रारम्भिक सूचना आएको प्रहरीले जनाएको छ । &lsquo;विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरुले सुराकीको आरोपमा मिक्लाजुङमा मंगलबार बिहान शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको सूचना आएको छ,&rsquo; प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो ।५४ वर्षीय श्रेष्ठलाई घरबाटै उठाएर करिब एक किलोमिटर पर पुर्याई टाउकोमा...
बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबालाई अदालतले दियो सफाइ
काठमाडौं &ndash; जिल्ला अदालत सुनसरीले हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिएको छ । पीडितको किटानी जाहेरीमा साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने कम्तीमा चार प्रमाण हुँदासमेत न्यायधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो ।सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार सुनुवाइ रोक्नुपर्ने भनी दिएको निवेदनसमेत वेबास्ता गर्दै जिल्ला अदालतले...
सरकारी सूचना प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ
काठमाडौं &ndash; सरकारी सूचना प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी विद्युतीय अपराधमा संलग्न तीन व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका&ndash;९ बस्ने विवेक महर्जनसहित कास्कीको पोखरा महानगरपालिका बस्ने अन्य दुई जना रहेको प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोले जनाएको छ। ती दुई जनाको अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले नाम नखुलाइएको ब्यूरोले जनाएको छ। &lsquo;ह्याकर्स हन्ट...
राजपुर बमकाण्डका आरोपी कांग्रेस नेता आलमका भाइ भारतबाट पक्राउ
काठमाडौं &ndash; रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहमद अफताब आलमका भाइ महताफ पक्राउ परेका छन् । भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा भारतको मोतिहारी जिल्लाबाट उनलाई पक्राउ गरेर रौतहटतर्फ ल्याइएको प्रहरी स्रोतले बतायो । २७ चैत ०६४ मा चुनावका वेला आलमका काका शेख इद्रिसको घरमा विष्फोट भएको थियो । त्यसमा घाइते...
९ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एक पक्राउ
काठमाडौं &ndash; ९ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एक पुरूष पक्राउ परेका छन्। शनिबार राति प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका &ndash;२१ दलाक्षीमा डेरा गरि बस्ने ५० वर्षीय बद्रीबहादुर धिताललाई पक्राउ गरेको हो। धितालले ती बालिकामाथि बलात्कार गरेको भन्ने खबर पाएपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त, जनसेवाबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। जनसेवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिलजंग...
बुटवलमा गोली चल्यो : एकजना घाइते
बुटवल &ndash; बुटवलको मिलनचोकस्थित एक होटेलमा गोली चलेको छ । गोली लागेर एक जना घाइते भएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ८ सुख्खानगरस्थित कलश होटलमा बसेका चार जनामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका ठेगाना भएका राकेश न्यौपानेलाई गोली लागेको हो । चिउँडोमा गोली लागेका उनलाई उपचार गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पुर्याइएको छ...
१४ वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउन जोखिम देखेपछि गोरखाका एक दम्पतीले बिहीबार छोरीलाई पोखराको थ्री एञ्जल्स नामक संस्थामा सुम्पिएर फर्किए। संस्थाले नै सुरक्षित सुत्केरी गराइदेला भन्ने विश्वासमा छन् उनीहरू। सात कक्षामा पढ्ने किशोरीको गर्भमा ३१ हप्ताको शिशु हुर्किरहेको छ। वैशाख ११ गते निउरो टिप्न जंगल गएकी उनलाई गोरखा नगरपालिका&ndash;८ का ६५ वर्षीय...
वीरगञ्ज &ndash; पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा एक युवकको शव फेला परेको छ । कालिकामाई गाउँपालिका&ndash;१ तीनडोबिया टोलका २६ वर्षीय एमामुल हुसैनको शव फेला परेको हो । नहरमा शव देखेपछि मंगलबार बिहान साढे ८ बजे स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । धोबिनी गाउँपालिका&ndash;२ भिखमपुरस्थित नहरमा हुसैनको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाका...
धनगढी &ndash;कैलालीमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । मोहन्याल गाउँपालिकाकी बालिका बलात्कारको आरोपमा सोही ठाउँका १९ वर्षीय जीवन शाहीलाई सोमबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक बिष्टले जानकारी दिए। पिडित पक्षले दिएको जाहेरीका आधारमा उनी पक्राउ परेको बिष्टले बताए । उनले ती बालिकालाई कात्तिक २५...
५ दिनदेखि बेपत्ता १७ वर्षीया युवकको शव झाडीमा फेला
बिराटनगर &ndash; सुनसरीको दुहबीमा पाँच दिनदेखि बेपत्ता एक युवकको शव फेला परेको छ । दुहबी नगरपालिका&ndash;२ का १७ वर्षीय सुजननारायण चौधरीको शव फेला परेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीका अनुसार सोमबार बिहान करिब ५ बजे दुहबी&ndash;२ मा रहेको शुभलक्ष्मी उद्योगको पछाडि रहेको झाडीमा चौधरीको शव भेटिएको छ । चौधरी १० मंसिरयता...
खेतमा काम गरिरहेका ११० किसान मजदुरको घाँटी रेटेर हत्या
काठमाडौं &ndash; नाइजेरियामा इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह बोको हरामले ११० जनाको क्रूर ढंगले हत्या गरेको छ । सो समूहले खेतमा काम गरिरहेकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर हातखुट्टा बाँधी घाँटी रेटेर हत्या गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यो हत्याको निन्दा गर्दै नाइजेरियाको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । घटना गत शनिबारको हो...
विप्लव समूहका जिल्ला नेता शर्मा पक्राउ
खोटाङ &mdash; प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला नेता पक्राउ परेका छन् । चन्द समूहका खोटाङ पूर्वआर्थिक विभाग प्रमुख सुदीप शर्मा शुक्रबार बिहान पक्राउ परेका हुन् । जनपद र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त अपरेशनमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका&ndash;२ डिकुवा क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरिएको खोटाङका डीएसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले बताए । उदयपुरको कटारीस्थित प्रहरीमा मुद्धा रहेको...
कञ्चनपुरमा दुई जनाको शव फेला
कैलाली &ndash; कञ्चनपुरमा दुई दिनको अवधिमा दुई जनाको शव फेला परेको छ । शुक्रबार बिहान भीमदत्त नगरपालिका &ndash; ४ स्थित महेन्द्रनगर बजारमा बेदकोट नगरपालिका ४ का २४ वर्षीय कमल दमाई मृत फेला परेका छन् । टेलिफोनको जस्तो देखिने तारको पासोले घाँटी बेरेको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ...
चितवन &ndash; जिल्ला कारागार चितवनबाट एकजना थुनुवा फरार भएका छन्। कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लेका अनुसार जबर्जस्ती करणी मुद्दामा गएको साउन २० गतेबाट थुनामा रहेका रेशमलाल श्रेष्ठ फरार भएका हुन्। उनका अनुसार साँझ ५ः३० बजे कैदीबन्दी गणनाका क्रममा बन्दीको सङ्ख्या कम भएपछि खोजी गर्दा उनी फरार भएको थाहा भएको हो। कालिका नगरपालिका&ndash;२...
परपुरूषसँग लागेको शंकामा खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
काठमाडौं &ndash; झापामा खुकुरी प्रहार गर्दा एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। खेतमा धान उठाउन जाँदा ३९ वर्षीया टीकादेवी पौडेललाई उनका श्रीमान ४७ वर्षीय चुडामणि भण्डारीले खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। खुकुरी प्रहारबाट टीकादेवीको आइतबार साढे ५ बजेको समयमा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धान उठाउन टीकादेवीसँग झापाकै दमक नगरपालिका&ndash;३ का ३५ वर्षीय...
बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्ष जेल
काठमाडौं &ndash; बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिएकी छन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि लागू हुनेछ । कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेष्ठ नागरिक ऐन,...
सल्यान । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका&ndash;९ का वडा अध्यक्ष इन्द्र कुमाईले घरमा दुइ वटी श्रीमती हुँदाहुँदै तेस्री पनि भित्र्याएका छन् । कुमाईले गाउँकै पाँच जना छोरछोरीकी आमा गौरी बोहोरालाई हालै भगाएका हुन् । घरमा पहिलेदेखि दुईवटी श्रीमती राखेका वडाध्यक्षले ५२ वर्षकी अर्की श्रीमती पनि थपेर तीनवटी बनाएका हुन् । उनको...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th November 2020
रोशी गाउँपालिका । रोशी गाउँपालिका वडा नं ११ स्थित भैँसेडाँडामा शनिबार बिहान आपसी झगडा हुँदा एक जनाको घटना स्थलमै मृत्युु भएको छ । स्थानीय २६ बर्षिय सुब्बा बिशुंखे र ५५ बर्षिय खड्ग नेपालीबिच जग्गाको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि झगडा भएको प्रत्यक्षदर्शी बताउ छ । रोशी गाउँपालिका वडा नं ११ का वडाध्यक्ष...
९० वर्षीया सोनारलाई आफ्नै छोराले बोक्सीको आरोपमा कुटपिटबाट मृत्यु
&nbsp; सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका&ndash; ३ की ९० वर्षीया सोनारलाई आफ्नै छोराले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरेर मलमूत्र खुवाउने प्रयास गरेका थिए । छोराको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी उनलाई सुरुमा उपचारका लागि जनकपुर लगिएको थियो । कुटपिटबाट उनको घाँटी थिचिएको र घाँटीको हड्डी मोडिएकोले ९० वर्षको उमेरमा हड्डीको सुधार हुँदैन भन्दै अस्पतालले डिस्चार्ज...
दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति वाकलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय
काठमाडौं - दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति ली म्युङ वाकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार भ्रष्टाचार अभियोगमा १७ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति रहेका अनुदारवादी नेता लीलाई उनकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत् आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको...
भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षसहित ३ पक्राउ
धनगढी - कैलालीमा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । वडाध्यक्ष जोशीले २०७५ साल फागुन २० गते भारतका अलियास अन्सारीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नम्बर...
काठमाडौँ : पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारततर्फ जाँदै गरेका तीन युवतीको उद्धार गरी माइती नेपालमा राखिएको छ। नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रबाट सुनसरी, गोरखा घर भई भक्तपुर बस्ने र गौरादह नगरपालिकाका १८ वर्षका युवतीलाई माइती नेपाल र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले उद्धार गरी माइती नेपालमा राखेको हो । उनीहरुले आफ्नै साथीले भारतको पानीटङ्कीमा...
भिनाजुद्वारा ५ वर्षे बालकलाई निर्मम करणी, बेहोस भएपछि घाँटी कसेर हत्या
जनकपुर : घरज्वाइँ बसेका रामबहादुर सदा बिहीबार दिउँसो १२ बजे बल्छी बोकेर माछा मार्न ससुराली घरबाट निस्के । बाटोमै काका ससुराका ५ वर्षीय छोरा (सालो) रूपेश सदा भेटिएपछि &lsquo;माछा मार्न जाने हो ?&rsquo; भन्दै सोधे । रूपेश भिनाजुसँगै जान तयार त भए, तर माछा दिनुपर्ने सर्तमा । लगातारको वर्षाले गाउँबाट ८ सय मिटर परको...
पूर्व उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादव र उनका दाइसहित ६ जनाविरुद्ध हत्या आरोपमा उजुरी दर्ता
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय जनता दलका नेता तथा बिहारका पूर्व उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादव र उनका दाइ तथा पूर्व मन्त्री तेजप्रताप यादवसहित ६ जनाविरुद्ध हत्या आरोपमा उजुरी दर्ता भएको छ । तेजस्वीसहित ६ जनामाथि पार्टीका पूर्व नेता शक्ति मलिकको हत्या आरोपमा उजुरी दर्ता भएको हो । पूर्णिया जिल्लामा उनीहरुविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो...
भक्तपुरमा बसभित्रै युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार
काठमाडौं &ndash; भक्तपुरमा एक सार्वजनिक बसभित्र सामूहिक बलात्कार भएको छ। शुक्रबार र शनिबार बा ३ ख २६१२ नम्बरको मिनीबसमा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भक्तपुर प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिए। बसकै कर्मचारीले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपालचोकको चौताराका २२ वर्षीय...
साइबर अपराध सम्बन्धी कसूरमा पूर्वडीएसपी खड्का दोषी ठहर
काठमाडौं &ndash; नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कृष्ण खड्का साइबर अपराध सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहरिएका छन् । खड्काले आफ्नो फेसबुक आईडीबाट बुहारीलाई अश्लील गालीगलौज गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो । तत्कालीन महानगरीय...
एजेन्सी &ndash;चीनमा टिकटकमा चर्चित एक युवतीलाई &lsquo;लाइभ&rsquo; गरिरहेकै बेला उनका पूर्वपतिले पेट्रोल छर्केर आगो लगाई हत्या गरेका छन्। लामु नाम गरेकी चिनियाँ युवतीको यसरी आक्रमण भएको दुई सातापछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बिबिसीले जनाएको छ। ३० वर्षीया लामुले गत सेप्टेम्बरमा अन्तिम भिडिओ पोस्ट गरेकी थिइन्। त्यसको दोस्रो दिन भिडियो लाइभमा आएकी उनको...
बलात्कारपछि त्रिशूलले रोपेर १२ वर्षीया सम्झनाको बीभत्स हत्या
कैलाली &ndash; बझाङ मस्टा गाउँपालिका&ndash;२ कि १२ वर्षीया सम्झना विश्वकर्माको बलात्कारपछि त्रिशूलले रोपेर हत्या गरेको पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहराले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बुधबार साँझ करिब ४ बजे गोठमा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न घरबाट निस्किएकी उनी घर फर्किनन् । राति करिब ९ः१५ बजे आफन्तले बालिकाको शव भेटेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका...
फेरि अर्की दलित युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या
काठमाडौं &ndash;भारतको उत्तर प्रदेशमा लगातार सामूहिक बलात्कारपछि हत्याका घटना भइरहेका छन् । हाथरसमा सामूहिक बलात्कारको घटनाले पूरै भारतभर प्रदर्शन भइरहेको छ । मानिसहरु आक्रोशित छन् । हाथरसको घटना सेलाउन नपाउँदै उत्तर प्रदेशकै बलरामपुरमा एक दलित युवतीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । युवतीका परिवारका सदस्यले बलरामपुर प्रहरी चौकीमा...
वीरगञ्ज &ndash; &lsquo;साँझ आठ बजेतिर भाइलाई खाना खान बोलाउन घरबाट निस्केको थिएँ । कता लुकेको थियो, शिवपुजन आएर हातमा समात्यो । को हो ? छोड्, भन्दै कराउँदा मुखमा ओढनी (सल) कोचिदियो अनि घिसार्दै लालबाबु चाचाको घरमा लगेर जर्बजस्ती गर्&zwj;यो ।&rsquo; बाराको सुवर्ण गाउँपालिका&ndash;५ ओरैयाकी १२ बर्षीया बालिकाको भनाइ हो यो ।...
अपहरण अभियोगमा पक्राउ परे व्यवसायी डेबिड
काठमाडौ &ndash; नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी अभियोगमा डेबिड भनिने दुर्गाबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । ब्युरोका अनुसार मलेसियामा बसेर गुन्डागर्दी र अपहरण गरेको भन्दै पीडित पक्षको जाहेरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ब्युरोका डीआईजी सहकुल थापाका अनुसार डेबिडले १५ लाख रुपैयाँ फिरौती मागेको...
विराटनगर &ndash; होटल सञ्चालकले कुटपिट गर्दा मोरङ उर्लाबारीमा एकजना ग्राहकको मृत्यु भएको छ । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका&ndash;७ मा रहेको युनिक होटलका सञ्चालक २६ वर्षीय गोपाल तामाङको कुटपिट गर्दा भारतको दार्जेलिङ घर भई उर्लाबारी बस्दै आएका सुशील मल्लिकको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार आइतबार राति...
बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई पनि कडा कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं &ndash; गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कार घटनामा मेलमिलाप गराउने, पञ्चायती बस्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई पनि मतियारको रूपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई आफूले निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सोमबार गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ)का प्रतिनिधि मण्डल र बझाङ जिल्लाका जनप्रतिनिधि मण्डलसँगको...
काठमाडौं - बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका...
काठमाडौं &ndash; बझाङमा १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रक्राउ परेका राजेन्द्र बोहराले यसअघि पनि अर्की बालिकालाई बलात्कार गरेको खुलेको छ । त्यो घटना भने गाउँमै मिलाएको पाइएको छ । बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया बालिका ७ असोजमा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न गोठमा गएकी थिइन् । उनी घर नफर्किएपछि खोजबिन गर्दा गाउँकै शिव मन्दिरमा...
बलात्कारको प्रतिकार गर्दा १२ वर्षीया बालिकाको हत्या !
विराटनगर &ndash; सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका&ndash; १ कटहरेमा मृत अवस्थामा फेला परेकी १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार प्रयासको प्रतिकार गर्दा हत्या भएको आशंका गरिएको छ । बाबु आमा छिमेकमा धामी राखिएको घर गएका बेला बालिकामाथि घरमै बलात्कार प्रयास भएको र त्यसको प्रतिकार गर्दा उनको हत्या भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । हत्यामा संलग्नको आशंकामा...
धनगढी &ndash; बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि नै हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ । जिल्ला अस्पताल बझाङमा गरिएको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला अस्पताललले शनिबार बेलुका प्रहरीलाई बुझाएको पोष्टमार्टम रिपोटमा &lsquo;यौनांगमा भित्री र...
बसुन्धारास्थित आइसोलेसनबाट फरार लागूऔषधका थुनुवा काभ्रेबाट पक्राउ
काठमाडौं &ndash; लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, कोटेश्वरको नियन्त्रणबाट फरार भएका कोरोना संक्रमित पक्राउ परेका छन् । ब्युरोको टोलीले लागूऔषध सम्बन्धी कसुरका प्रतिवादी रमेश तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । काभ्रेको सिउरिनीमा लुकेर बसेको अवस्थामा उनलाई गएराति पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ । तामाङको घर काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा हो । उनी शुक्रबार बिहान पौने २...
साढे १३ लाख लुटपाटको अभियोगमा बौद्ध प्रहरीले समातेका पाँचै जनालाई कोरोना पुष्टि
काठमाडौं &ndash; महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धले चोरी अभियोगमा पक्राउ गरेका ५ जना अभियुक्तलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थप गर्नुअघि गरिएको पिसीआर जाँचमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । बौद्ध प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार नेपाल मेडिकल कलेजको आइसोलसनमा उनीहरुलाई राखिएको छ । उनीहरुमाथि १३ लाख ५० हजार...
नक्कली प्रेस कार्ड बनाउने मुख्य आरोपितलाई कोरोना भेटिएपछि आइसोलेसनमा,अन्य तीन १०/१० हजार धरौटीमा छुटे
काठमाडौं नक्कली प्रेस कार्ड बनाएको अभियोगमा पक्राउ परेका तीन जना धरौटीमा छुटेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले १०/१० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । प्रशासनको आदेशपछि बर्दियाका श्रीराम खड्का, नवलपुरका रमेशकुमार रेग्मी र स्याङ्जाका राजेन्द्र भण्डारी छुटेको एसएसपी दिपक थापाले बताए । मुख्य आरोपित बागबजारस्थित कालिका प्रिटिङ...
राष्ट्रिय झण्डा जलाउने गायक ग्लाल्जेनलाई थुनामा पठाउन आदेश,अन्य ८ जना छुटे
काठमाडौं &ndash; नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका ९ जना मध्ये एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले म्युजिक भिडियोका गायक ग्लाल्जेन दोर्जे तामाङलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । पक्राउ परेका मध्ये १५ हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर अदालतले छाडेको छ । अन्य ५ जनालाई...
विराटनगर &ndash; भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रस्थित दशगजामा गोली चल्दा एक युवक घाइते भएका छन्। विराटनगर र भारतको जोगबनीको दशगजामा विराटनगर १२ का दीपक मण्डल घाइते भएको प्रहरी कार्यालय मोरङ्गले जनाएको छ। मोरङ्गले प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार घाइते मण्डल खुट्टाको औलामा चोट लागेको छ । २४ वर्षीय मण्डल लागु औषध...
बञ्चरो प्रहार गरी आफनै छोराले गरे आमाको हत्या
दमक - झापाको कमल गाउँपालिका&ndash;७ मा आइतबार साँझ ७ बजेतिर छोराले आमाको हत्या गरेको छन्। बाह्रघरे नजिकै मुसहर बस्तीका स्थानीय २१ वर्षीय दिनेश ऋषिदेवले बञ्चरो प्रहार गरी ५० वर्षीया आमा मीरा ऋषिदेवको हत्या गरेका हुन्। मदिरा सेवन गरेर आएका दिनेशले आमासँग विवाद भएपछि बञ्चरो प्रहार गर्दा आमाको घटनास्थलमै ज्यान गएको इलाका प्रहरी...
किर्ते मुद्दाका अभियोगी वडाध्यक्ष बुढा दुई लाख धरौटीमा छुटे
सिमकोट &ndash; हुम्लामा किर्ते मुद्दाका अभियोगी एक वडाध्यक्ष दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं १ का वडा अध्यक्ष मकुसिंह बुढालाई जिल्ला अदालतले दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। बुढाविरुद्ध किर्ते कागजात तयार पारी नागरिकता वितरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।...
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा मृत्यु भएका थप ४ कैदीमा कोरोना पुष्टि
काठमाडौं - काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारमा मृत्यु भएका थप ४ जना कैदीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छन् । भदौ १६ गते मृत्यु भएका ३ जना र भदौ १९ गते मृत्यु भएका १ जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जेलर लक्ष्मी बास्कोटाले जानकारी दिए । केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ४ जनाको भदौ १६ गते मृत्यु...
बलात्कार प्रयासको आरोपमा गौशालामा कार्यरत एक प्रहरी जवान पक्राउ
काठमाडौं &ndash; बलात्कार प्रयासको आरोपमा महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत एक प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन् । महनगरीय प्रहरी बृत्त गौशालाका प्रमुख डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, प्रहरी जवान उपेन्द्रसिंह बलात्कार प्रयास अरोपमा पक्राउ परेका हुन् । डिएसपी बस्नेतले भने, एक २१ बषीया युवतीले वनकालीस्थित छाप्रोमा गएर आफूलाई बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै उजुरी...
एकैदिन ३ बालिकालाई बलात्कार : ४३ वर्षीय नन्दमान गुरुङ पक्राउ
लमजुङ&ndash; एकैदिन तीन बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा क्व्होलासोंथर गाउँपालिका&ndash;३ बगुमका ४३ वर्षीय नन्दमान गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुरुङले ११/११ वर्षीय दुई जना र नौ वर्षीया एक बालिकालाई कोही नबस्ने गरेको एक घरमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर थापाले बताए। उनले भने, &lsquo;गुरुङले गत...
पेस्तोलसहित ३ पक्राउ
जनकपुरधाम - सिरहा प्रहरीले मिर्चैया नगरपालिकाबाट नलकटुवा पेस्तोलसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ बाह्रबिघामा चेकजाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार दुई युवकलाई हतियारसहित शुक्रबार राति पक्राउ गरिएको हो । को ३५ प ४०१३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार मिर्चैया नगरपालिका ६ बस्ने १९ वर्षीय अजय शर्मा र मिर्चैया ५ बस्ने...
घाँटी काटिएको अवस्थामा २८ वर्षीष पुरुषको शव फेला
झापा - शिवसताक्षी नगरपालिकास्थित बजारबाट एक किलोमिटर उत्तर रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जंगलमा एक जना पुरुषको शव भेटिएको छ । घाँटी काटिएको अवस्थामा स्थानीय २८ वर्षीय गोमानसिंह मगरको शव भेटिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रमुख एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार मगरको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान पठाइएको...
९ वर्षीया बालिकालाई ललाईफकाई गरेर बलात्कार गर्ने गुरुङ पक्राउ
काठमाडौँ &ndash; कास्कीमा ९ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक ५५ वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन्। कास्की प्रहरीले पोखरा महानगरपालिकाका रेशबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ।&nbsp; गुरुङ पूर्व भारतीय सैनिक हुन्। उनले सुवेदारबाट अवकाश पाएका थिए। पीडित बालिका, गुरुङको छिमेकीकी छोरी हुन्। प्रहरीका अनुसार पीडित बालिकालाई गुरुङले चार,पाँच महिनादेखि आफ्नै घरमा बोलाएर जबर्जस्ती...
ससुराले जग्गा किन्न राखेको पैसा हात पार्न सालाको अपहरण
नेपालगञ्ज - ससुराले जग्गा किन्न राखेको पैसा हात पार्न नेपालगञ्जका कल्लु भन्ने कलिम खाँले सालाको अपहरण गरेका छन्। भदौ ९ गते राती साढे आठ बजे मोहर्रम हेर्न गएको बेला नेपालगञ्ज १६ का खाँले आफ्नै १३ वर्षीय साला इसहाक जाकिर भन्ने इन्तजार खाँलाई अपहरण गरेका हुन्। भदौ १० गते जग्गा किन्ने तयारीमा रहेका...
महिलाको नाममा फेक अकाउन्ट खोलेर पुरुषहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ, अश्लिल फोटो पठाउन लगाएर बार्गेनिङ
काठमाडौं - महिलाको नाममा फेक फेसबुक अकाउन्ट खोलेर पुरुषहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै ठगि गरेको आरोपमा कैलालीका एक पुरुष काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन्। कैलालीका २७ वर्षीय धनबहादुर शाही कोटेश्वरबाट पक्राउ परेका हुन्। शाहीले गुगलबाट महिलाको तस्विर खोजी प्रोफाइल पिक्चर राखेर पुरुषहरुसँग यौनजन्य गफ गर्दै अश्लिल तस्विरहरु पठाउन लगाएको र तीनै तस्विर देखाएर पछि...
प्रहरीको मस्ट वान्टेड रहेका लागूऔषध कारोबारी नाइके बग्गा पक्राउ
विराटनगर - प्रहरीले हतियार तथा लागूऔषध कारोबार गर्ने गिरोहका नाइके बग्गा भनिने प्रदीप यादवलाई पक्राउ गरेको छ । भारतको अररियाबाट नेपालको पूर्वी तराईका जिल्लामा लागूऔषध र हतियार कारोबार गर्ने गिरोहका नाइके बग्गा प्रहरीको मस्ट वाण्टेड सूचीमा थिए । शनिबार दिउँसो साढे ४ बजे घर मिलाउन विराटनगर आएका बग्गालाई प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका&ndash;१६ दरैयाबाट...
१६ वर्षीया किशोरीलाई बेहोस बनाएर ३० जनाद्वारा सामूहिक बलात्कार!
एजेन्सी - इजराइलको प्रहरीले दक्षिण शहर एलाटको एक होटलमा १६ वर्षीया एक किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोमा अहिलेसम्म दुई व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको छ तर उनीहरुले आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार किशोरीमाथि ३० भन्दा बढीले यौन सम्बन्ध स्थापित गरेका...
काठमाडौं - प्रहरीले माछापोखरीबाट दुई वटा पेस्तोल, त्यसमा लाग्ने दुई म्यागजिन र १० राउण्ड गोली बरामद गरेको छ । प्रकरणमा संलग्न एक जना माछापोखरीबाट समातिएका छन् भने अर्का व्यक्ति नुवाकोटबाट पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिपक थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको शिखरवेसी&ndash;६ का विकेश पण्डित र नुवाकोटको...
राष्ट्रिय झण्डा जलाएको अभियोगमा ८ जना पक्राउ
काठमाडौं &ndash; म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको अभियोगमा ८ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गीत गाउने ग्लाल्जेन दोर्जे तामाङसहित अभिनय र इडिटिङ गर्ने व्यक्तिसम्म छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६ जना र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले दुई जनालाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । दुई दिनअघि मङगोल...
जब राती ९ बजे डल्लुबाट एक युवक अपहरणमा परेको सुचना प्रहरीकोमा आयो..
काठमाडौं &ndash; एक व्यक्तिलाई अपहरण गरेको आरोपमा ललितपुरको इमाडोलबाट पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सोमबार राति ९ बजे अपहरणमा परेको भन्दै प्रहरीलाई सूचना पुगेको थियो । काठमाडौँको डल्लुबाट कैलाली टिकापुरको किसन डगौरा अपहरणमा परेको भन्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा फोन गरेर एक व्यक्तिले सूचना दिएका थिए । प्रहरीलाई सूचना...
काठमाण्डौमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक युवकको हत्या
काठमाण्डौ &ndash; काठमाण्डौको बानियाँटारमा एक युवकको हत्या भएको छ । गएराति धारिलो हतियारको प्रहारबाट काठमाण्डौको तारकेश्वर नगरपालिका लोलाङका २४ वर्षीय लक्ष्मण तामाङको हत्या भएको बानियाँटार प्रहरीले जनाएको छ । दुई समूहबीच झगडा हुँदा हत्या भएको प्रहरीले आशंका गरेको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ ।...
बोल्न नसक्ने महिलामाथि सामुहिक बलात्कार
महोत्तरी । महोत्तरीमा बोल्न नसक्ने एक महिलामाथि सामुहिक बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यही साउन १० गते रामगोपालपुर नगरपालिका( ५ की एक ३५ वर्षीय बोल्न नसक्ने महिलामाथि स्थानीय दुईजना युवाद्वारा सामुहिक बलात्कार भएको थियो । १० गते राति करिब ९ बजे घरनजिक चौरमा शौच गर्न गएकी ती महिलालाई दुई...
साढे २४ लाख भारु सशस्त्र प्रहरीद्वारा बरामद
कपिलवस्तु । शसस्त्र प्रहरी बलले कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा भारतबाट अबैध रुपमा भित्राइएको साढे २४ लाख भारतीय रकम बरामद गरेको छ । कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ को लिंकगेट भन्दा ४ सय मिटर पूर्व पालमा ड्युटीमा रहेको शसस्त्र प्रहरी बल नंम्बर ३९ राजश्व भन्सार सुरक्षा गुल्मको टोलीले बुधबार बिहान पौने ५ बजे...
बोहरा हत्यामा संलग्न कल्पनाको वयान : 'फेसबुकमा अन्तरंग फोटो सार्वजनिक गर्न थालेपछि हत्या गरें'
काठमाडौं &ndash; दाङ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहोराको हत्यामा संलग्न महिलाले नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर आफूलाई दुःख दिन थालेपछि हत्या गरेको बताएकी छन् । अन्तरंग तस्वीरहरु नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर सार्वजनिक गर्न थालेपछि र आफूअनुकूल चल्न दबाव दिन थालेपछि हत्या गरेको वयान उनले दिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख दीपक...
गोंगबु हत्या आरोपीको बयान – ‘नशालु चक्की खुवाएर बेहोस बनाएँ,एक्लैले हत्या गरेकी हुुँ'
काठमाडौं &ndash; गोंगबुको नवज्योती मार्गमा दाङका कृष्णबहादुर बोहराको हत्या गरेर सुटकेशमा शव फाल्ने आरोपीलाई सोमबार प्रहरीले चितवनबाट पक्रेर काठमाडौँ ल्याएको छ । आफूलाई कल्पना शाही बताउने हत्या आरोपीको वास्तविक नाम कल्पना मुडवरी भएको खुलेको छ । कृष्णबहादुरसँग उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कमला पौडेलको नामबाट कुरा गर्थिन् । कल्पनाले शनिवार राती आफ्नो फ्ल्याटमा...
गोंगबु हत्याकाण्ड : आर्थिक लेनदेनसँगै अन्य विवाद रहेको प्रहरीको भनाइ,मृतकको लिंग पनि काटिएको अवस्था
काठमाडौं &ndash; गोंगबु हत्याकाण्डमा संलग्न भन्दै चितवनबाट पक्राउ परेकी कल्पना शाही र मृतक कृष्णबहादुर बोहराबीच आर्थिक लेनदेनका कारण मतभेद रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ परेकी महिला भाडामा बसेको घरमा मृतकको धेरै आउजाउ हुने गरेको थियो। हत्या भएको रात ती महिला काठमाडौंमै थिइन्। उनी शव...
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस नजिकै गोली चल्यो
एजेन्सी - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कसैमाथि राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस नजिकै गोली प्रहार भएको बताएका छन् । ह्वाइट हाउसमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलन आकश्मिक रुपमा त्यहाँबाट गएका थिए । उनलाई गुप्तचर निकयाका एजेन्टले विशेष जानकारी दिएपछि पत्रकार सम्मेलन छोडेर भित्र गएका हुन् । उनको सुरक्षामा खटिएका ती एजेन्ट पत्रकारको प्रश्नको जवाफ...
गोंगबुमा विभत्स हत्या : जेब्रा झोलामा खुट्टा र टाउको,सुटकेशमा शव फेला
काठमाडौं &ndash; राजधानीको गोंगबुस्थित गणेशस्थान नजिकै बेवारिसे अवस्थाको सुटकेशमा शव फेला परेको छ। सुटकेशबाट रगत बगिरहेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता राजकुमार केसीले सुटकेशभन्दा दुई सय मिटरको दूरीमा जेब्रा झोलामा खुट्टा र टाउको फेला परेको जानकारी दिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गरिएका व्यक्तिको...
गोंगबुमा सुटकेसभित्र टाउकोविनाको शव फेला
काठमाडौं &ndash; गोंगबुको गणेशस्थान नजिक सुटकेसभित्र टाउको विनाको शव फेला परेको छ । टाउको भने तीन सय मिटर टाढा भेटिएको छ । शवको पहिचान भएको छैन । घटनास्थलमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवाली, अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी दीपक थापालगायतको टोली पुगेको छ ।...
मुटुमा समस्या देखिएपछि रेशम चौधरीलाई कारागारबाट वीर अस्पताल लगियो
काठमाडौं &ndash; कैलालीको टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी अस्पताल भर्ना भएका छन् । डिल्लीबजार कारागारमा रहेको उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो । कारागार सुरक्षामा खटिएका एक अधिकारीले बताए अनुसार चौधरीको खुट्टा र मुटुमा समस्या देखिएपछि चौधरीलाई वीर अस्पताल भर्ना गरिएको छ । टीकापुरमा थारु आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका वेला ७...
बौद्ध चुच्चेपाटीमा आमा–छोरीमाथी ‘थिनर’ आक्रमण
काठमाडौं &ndash; काठमाडौंको बौद्ध चुच्चेपाटीमा एक व्यक्तिले श्रीमती र छोरीलाई &lsquo;थिनर&rsquo; प्रहार गरेका छन् । घरायसी विवादमा गएराति थिनर प्रहार गर्ने विष्ट थरका व्यक्तिलाई बौद्ध प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनी हेटौंडाका हुन् । चुच्चेपाटीमा एसिड आक्रमण भएको हल्ला चले पनि एसिड नभई थिनर आक्रमण भएको पाइएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले...
तस्करको समूहद्धारा प्रहरीको गाडीमाथि ढुंगामुढा
विराटनगर । विराटनगरस्थित नेपाल&ndash;भारत सीमवर्ती क्षेत्रमा प्रहरीको गाडी तोडफोड भएको छ । गस्तीको क्रममा तस्करको समूहले शनिबार राति गाडिमा आक्रमण गरी तोडफो८ गरेको प्रहरीले बताएको छ । गाडी तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका&ndash;१५ रानीबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा २६ वर्षीय अनिल साह र २४ वर्षीय...
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका&ndash;७ भगतपुरमा गए राति धारिलो हतियार प्रयोग गरी अज्ञात समूहले ५५ वर्षीय बेलु खातीको हत्या गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले श्रीमती खातीको हत्या गरिएको बताउँदै उनका श्रीमानलाई हतियार प्रयोग गरी गम्भीर घाइते बनाएको जानकारी दिनुभायो। उहाँले अज्ञात समूहकै आक्रमणबाट हत्या...
काठमाडौं । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले काभ्रेमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धुलिखेल&ndash;११ का २१ वर्षीय सञ्जिव मैनाली र २३ वर्षीयरुपेन्द्रमान लामा छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविकुमार पौडेलका अनुसार बिहीबार पाँचखाल&ndash;१० मा भेटिएको धुलिखेल&ndash;११, कैदीटोलीका ५४ वर्षीय कामिसिङ तामाङको शवको...
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको घटना अनुसन्धानमा संलग्न एसपी विष्टसहित प्रहरीले पाए सफाइ
काठमाडौं - निर्मला बलात्कारपछि हत्याको घटना अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले सफाइ पाएका छन् । तत्कालिन कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ जना प्रहरी विरुद्ध दर्ता भएको सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसूर र यातनासम्बन्धी कसूरमा उनीहरुले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट सफाइ पाएका हुन् । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले जिल्ला न्यायाधीश गोपालप्रसाद वास्तोलाको इजलासले दुबै...
अश्लील भिडियो बनाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ
कैलाली - अश्लील भिडियो बनाएको आरोपमा कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका&ndash; ५ का २० वर्षका मोहनराज भट्ट पक्राउ परेका छन् । युवकले प्रेमिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि अश्लील भिडियो साथीलाई पठाएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक अमर थापाले बताए । &lsquo;अश्लील भिडियो प्रेमीले आफ्नो साथीलाई पठाएको र त्यो मार्फत पीडित परिवारको घरसम्म...
उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने निर्णय,महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम भने परिवर्तन हुने
काठमाडौं&nbsp; - उपत्यकाका प्रहरी कार्यालय केन्द्र मातहत राख्ने निर्णय भएको छ । तर, उपत्यकाको महानगरीय प्रहरी सम्बन्धी अवधारणा भने खारेज हुने भएको छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी समन्वय समितिका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर यो निर्णय गरेका हुन् । योसँगै उपत्यका प्रहरीको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन हुने भएको गृहका...
काठमाडौं । पर्सा प्रहरीले लागूऔषधसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बाराको बिश्रामपुर&ndash;५ इटियाहीका १९ वर्षीय शेख अजाद रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीको गस्ती टोलीले उनलाई मंगलबार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १२ गण्डक चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । उनको साथबाट २/२ सय थान नुर्फिन, फेनारगन र डाइजेपाम...
दुई बालिका बलात्कार आरोपमा युट्युबर शिवाकोटी जेल चलान
काठमाडौं - विश्व हिन्दु महासंघको पदाधिकारी र युट्युबरका रुपमा आफूलाई चिनाउने अर्जुन शिवाकोटीलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो । बानियाँटारकी १२ र १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा शिवाकोटीलाई थुनामा पठाउन आदेश भएको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका...
फेसबुक ह्याक गरेर रकम असुली गर्ने २३ वर्षीया युवक पक्राउ
काठमाडौं - फेसबुक ह्याक गरेर रकम असुली गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । सुनसरीको दुहबीबाट २३ वर्षीय सविर आलम पक्राउ परेका हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, बानेश्वरको टोलीले सुनसरी प्रहरीसँग समन्वय गरेर आलमलाई पक्राउ गरेको एसएसपी दिपक थापाले बताए । थापाका अनुसार आलमले विभिन्न व्यक्तिको फेसबुकमा अनाधिकृत रुपमा पहुँच...
स्कुटरको डिकीमा पैसा राख्नु हुन्छ ? होसियार !
काठमाडौं । के तपाईं स्कुटर पार्क गरेको बेला डिकीमा पैसा छोडेर हिँड्ने गर्नु भएको छ ? त्यसो भए होसियार हुनुस् । तपाईंको पैसा चोरी हुन पनि सक्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले स्कुटरको डिकीमा राखेको पैसा झिकेको अभियोगमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार बानेश्वर...
युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने मुन्ना भन्छन्- 'शाहुले हान्न लगाए,रक्सी भनेर हानेको थिएँ,एसिड रहेछ'
काठमाडौं - काठमाडौंको सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड हान्ने भारतीय नागरिक मुन्ना मोहम्मदले साहुको निर्देशनमा एसिड हानेको बयान दिएका छन् । साथै, साहु रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भइ हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलमले उनलाई राति नै भारततिर जान भनेको पनि मुन्नाले खुलासा गरेका छन् । तर, महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा र काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुको...
भोजपुर । भरुवा वन्दुक सहित एकजना पक्राउ परेका छन् । भोजपुरको दक्षिणि आमचोक गाउपालिका १० पाचांका वलवहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । घरमा भरुवा बन्दुक लुकाई छिपाई राखेको भन्ने विशेष सुचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय बालंखा, भोजपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले वलवहादुर तामाङको घरबाट १ थान राजकुमार तामाङको घर बाट १...
सीतापाइलामा युवतीलाई एसिड हान्ने दुई जना पक्राउ,भारत भाग्ने योजनामा थिए अभियुक्त
काठमाडौं - काठमाडौंको सीतापाइलामा युवतीलाई एसिड प्रहार गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको संयुक्त टोलीले एसिड प्रहार गर्ने दुई जनालाई डल्लुबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई हाल डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम...
सीतापाइलामा २२ वर्षीया युवतीमाथि एसिड प्रहार
काठमाडौं - बिहीबार साँझ सीतापाइलामा एक युवतीमथि एसिड प्रहार भएको छ । ओखलढुंगा घर भएकी २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको प्रहरीले बताएको छ । घरबाट दही किन्न भनेर निस्किएकी उनीमाथि एसिड प्रहार भएको हो । उनको अनुहारमा एसिड परेको छ । उनलाई कीर्तिपुरस्थित अस्पतालमा लगिएको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख...
श्रीमतीको हत्या गरेर जेल पुगेका पूर्वडीआईजी कोइराला हात हल्लाउँदै निस्किए, लिन पुगिन् प्रेमिका तारा
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर पूर्वसशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएका छन् । डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले कोइरालालाई बिहीबार जेलमुक्त गरेको हो । कोइरालालाई लिन उनकी प्रेमिका तारा डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन् । उनकै कारमा कोइराला घरतर्फ लागेका थिए । सञ्चारकर्मीतर्फ हेरेर...
फिल्मी शैलीमा पेस्तोल देखाएर रकम लुटियो
जनकपुरधाम । धनुषामा पेस्तोल देखाएर एक व्यक्तिको साथबाट ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लुटिएको छ । बुधबार धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर&ndash;२ बस्ने बद्रि मण्डलका २० बर्षिय छोरा धिरज कुमार अधिकारीको साथबाट सो रकम लुटिएको हो । अधिकारी बुधबार दिउँसो करिव साढे एक बजे जनकपुरबाट आफ्नो घर फर्कने क्रममा जलाद पुल नजिकै...
राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्न नलिनीले गरिन् जेलमै आत्महत्याको प्रयास
काठमाडौं - भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भइ जेल सजाय काटिरहेकी नलिनी श्रीहरणले आत्महत्याको प्रयास गरेको उनका वकिलले बताएका छन् । विगत २९ वर्षदेखि जेलमा रहेकी नलिनीले सोमबार राति आत्महत्याको प्रयास गरेकी हुन्। तमिलनाडूको भेलोरको जेलमा रहेकी नलिनीले आत्महत्याको असफल प्रयास गरेकाले उनको जीवन रक्षाका लागि जेल...
टोखाबाट अपहरणमा परेको ३ घण्टामा सकुशल उद्धार, सात पक्राउ
काठमाडौं - काठमाडौंमा शुक्रबार बिहान अपहरणमा परेका व्यक्तिको दिउँसो सकुशल उद्धार गरिएको छ। टोखाको कोठाबाट रामबाबु साहलाई चार/पाँच जनाको समूहले अपहरण गरेर लगेका थिए। आफ्ना बाबु अपहरणमा परेको र २५ लाख माग राख्दै अपहरणकारीले साहका छोरालाई फोन गरेका थिए। लगत्तै उनले बिहान साढे १० बजे प्रहरी कन्ट्रोलमा आफ्ना बुबालाई अपहरण गरेको भन्ने...
सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्कर र प्रहरीबीच गोली हानाहान,२ जना घाइते
सुनसरी &ndash; सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्र देवानगन्ज गाउँपालिका&ndash;३ स्थित पानी ट्याङ्की नजिक गएराति नेपाल प्रहरी र भारतीय तस्कर समूहबीच गोली हानाहान भएको छ । गोलाबारीमा परी दुई जना तस्कर घाइते भएका छन् भने अन्य तीन जना फरार भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । घाइते हुनेमा देवानगन्ज&ndash;२ का राजेश यादव र...
क्वारेन्टिन बसेका कोरोना संक्रमितलाई प्रहरीद्धारा निर्घात कुटपिट,पीडितको बायाँ हात भाँचियो
काठमाडौं&nbsp; - दुई महिनाअघि रूकुममा प्रहरीले महिलामाथि कुटपिट गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै सुर्खेतमा पनि एक प्रहरीले कोरोना संक्रमितलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटेको भेटिएको छ। सुर्खेको सिम्ता गाउँपालिकामा प्रहरी सहायक निरीक्षक विजय पुनले एक जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई सोमबार कुटपिट गरेको पाइएको हो। सिम्ता गाउँपालिका&ndash;६ को बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयकको क्वारेन्टिनमा बसेका सिम्ता गाउँपालिका&ndash;८ का...
बलात्कारको आरोपमा सशस्त्रका एसएसपी अधिकारी पक्राउ
काठमाडौं&ndash; सशस्त्र प्रहरी बलका एक वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले एसएसपी राजेन्द्र अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । एक महिलाले अधिकारीविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकारी सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र लामापाटन, पोखरामा कार्यरत थिए । बुधबार आफ्नै निवासमा...
गोंगबुबाट पोर्न भिडियो अपलोड!
काठमाडौं - पोर्न साइट बनाएर नेपाली युवतीका अश्लील भिडियो अपलोड गर्ने गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध ब्युरोले काठमाडौंको गोंगबुका २३ वर्षीय सुरज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। सुरजले ब्लुसंसार डटकम नामको पोर्न साइट खोलेर चितवनकी एक युवतीको अश्लील भिडियो अपलोड गरेको ब्युरोले जनाएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन...
काठमाडौं - भारतका गुण्डा नाइके विकास दुवे प्रहरी कारवाहीमा मारिएका छन् । प्रहरीको हतियार खोसेपछि जवाफी कारबाहीमा उनी मारिएको भारतीय प्रहरीको दाबी छ । दुवे बिहीबार उज्जैन भन्ने स्थानको महांकाल मन्दिरबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई प्रहरीले शुक्रबार बिहान कानपुर लग्दै थियो । भारतीय प्रहरीको दाबी अनुसार उनी सवार गाडी शुक्रबार बिहान...
नेहामाथि निर्घात कुटपिट गर्ने नगर प्रहरी निलम्बित
दाङ - रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं. ९ की २१ वर्षीया नेहा विष्टमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने नगर प्रहरी निर्मला विक निलम्बित भएकी छन्। आठबिसकोट नगरपालिकाले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकासित गरी विकलाई निलम्बित गरिएको जानकारी दिएको हो। जेठ १ गते दिउँसो जाजरकोटबाट घर फर्कंदै गरेकी नेहालाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अमानवीय ढंगले कुटिपट भएको...
वीरगञ्ज । आईसीयूमा उपचार गराइरहेकी युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपममा वीरगञ्जको बिर्तास्थित अली अर्थो एण्ड ट्रमा हस्पिटलमा कार्यरत तीन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ लिएको छ । वीरगञ्जकै १९ वर्षीया युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा हस्पिटलमा कार्यरत एहसान हुसैन, कृष्ण दास र सरफुदीन मियाँलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । स्वास्थ्यकर्मीले लुगा फेर्ने बहानामा...
काठमाडौंबाट गैंडाको खागसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले गैंडाको खागसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरले काठमाडौं महानगरपालिका सिनामङ्गलस्थित एक क्याफेबाट सोमबार खाग बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिका-४ घर भई ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाको टौखेल बस्ने ६० वर्षीय सरोज गुरूङ, सिन्धुलीको दुधौली-११ घर भई भक्तपुर नयाँठिमी...
नसालु पदार्थ खुवाएर महिलामाथी सामूहिक बलात्कार गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं - प्रहरीले सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका बस्ने दोलखाका पासाङ शेर्पा र कागेश्वरी मनोहरा बस्ने सिन्धुपाल्चोकका भुवन विष्ट छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका डीएसपी नविन कार्कीका अनुसार पीडितले खबर गरेलगत्तै शनिबार राति नै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार महिला...
जनकपुर &ndash; जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी १० वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंकामा प्रहरीले २० जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २१ कुर्थास्थित घाटमा बस्ने एक अघोरी बाबासहित २ जनालाई शुक्रवार नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका लागि भन्दै थप १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमा ब्लाङ्केट पनि...
कैलाली -&nbsp; कञ्चनपुरमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक जनाको हत्या भएको छ । जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका&ndash;५ मा शनिबार राति धारिलो हतियार प्रहार गरी स्थानीय ५० वर्षीय गोपाल कुँवरको हत्या भएका हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका डीएसपी अमर थापाका अनुसार हत्यामा संलग्नको पहिचान भइसकेको छ । थापाले भने, &lsquo;घटनामा संलग्न देखिएका गौरव...
दोलखामा १२ वर्षीय भाईलाई २२ वर्षीय दाईले गरे करणी
दोलखा - दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका&ndash;३ मा १२ वर्षीय भाईलाई अप्राकृतिक मैथुन गरेको अभियोगमा २२ वर्षीय दाई प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । २२ वर्षीय युवकले गत मंगलबार आफ्नै घरमा काकाको छोरा (१२ वर्षीय भाई)लाई बोलाएर गुदद्वारमा अप्राकृतिक मैथुन गरेका थिए । गुदद्वारमा अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्दै २२ वर्षीय युवकविरुद्ध किटानी जाहेरी परेपछि...
आपराधिक समूहको मुठभेडमा डीएसपीसहित ८ प्रहरीको मृत्यु
नयाँदिल्ली &ndash; भारतको उत्तरप्रदेशस्थित कानपुर जिल्लामा आपराधिक समूहसँगको मुठभेडमा एक डीएसपीसहित आठ प्रहरी मारिएका छन् । बिहीबार राति करिब एक बजेतिर आपराधिक समूहले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा एक डिएसपी र तीन इन्सपेक्टरसहित आठ प्रहरी मारिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । प्रहरीहरु लामो समयदेखि फरार अभियुक्त विकास दुवेलाई पक्रन बिकरू भन्ने गाउँमा जादा उनीहरूमाथी...
जबरजस्ती करणी मद्दामा फरार ४ जना प्रहरीको फन्दामा
कैलाली&ndash; जबरजस्ती करणी मद्दामा फरार ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । फरार ४ जना लाई प्रहरीले खोज तलास गर्दै जादा बिभिन्न मितिमा पक्राउ गर्न सफल भएको हो । पक्राउ पर्नेमा कैलालीको कैलारी गाउपालीका वडा नं ८ लौसा बस्ने वर्ष २० का उमेश कठरिया, कैलाली लम्की चुहा नगरपालिका ४ बस्ने वर्ष...
इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको घटनाका आरोपी थप एक पक्राउ, ८ अझै फरार
काठमाडौं&ndash; रौतहटको राजपुरमा इँटा उद्योगमा जिउँदै मान्छे जलाएको (१३ वर्षअघिको घटना)का आरोपी एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा राजपुर नगरपालिका&ndash;६ का ३४ वर्षीय शेष सरोज भन्ने शेष सराज रहेका छन्। सोही घटनाका आरोपी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद अफताब आलम हाल मुद्धा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। उनीपछि अर्का प्रतिवादीलाई प्रदेश&ndash;२...
लागूऔषध कारोबारमा संलग्न इन्स्पेक्टर शाहीलाई ९ दिन थुनामा राख्न अनुमति
काठमाडौं - ललितपुर प्रहरी परिसर, जावलाखेलबाट पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका निरीक्षक रुद्र शाहीलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले लागूऔषध कारोबार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, कोटेश्वरका एसपी प्रविण धितालका अनुसार प्राप्त समयमा शाहीको बयान र उनको संलग्नताबारे...
काभ्रेमा बोधिचित्त लुटपाट गर्ने समुहमाथी प्रहरीले चलायो गोली
काठमाडौं&nbsp; - काभ्रेको रोशी गाउँपालिका&ndash;३, सिपालीमा प्रहरीले गोली चलाएको छ । बोधिचित्त लुटपाट भएको सूचना आएपछि गाउँमा पुगेको प्रहरीको हतियारधारी समूहसँग जम्काभेट भएको थियो । त्यसक्रममा गोली चलेको काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने, &lsquo;बाटोमा बम जस्तो देखिने वस्तु पनि राखेको भनिएको छ । विस्तृत जानकारी आइसकेको...
काठमाडौं&ndash; एकदशक अघि रौतहटमा गराइएको बम विस्फोट घटनाका आरोपी दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सदरमुकाम गौरबाट चन्द्रनिगाहपुर आउँदै गरेको बसमा बम विस्फोट गराई १३ जनालाई घाइते बनाएको अभियोग लागेका दुई जनालाई रौतहट प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । इशनाथ नगरपालिकाको रामपुरखापका शेख गुलाम सरबर र दिलीपकुमार साहलाई बम विस्फोटको आरोपमा...
काठमाडौं प्रहरी प्रमुखका घुमुवा पक्राउ
काठमाडौं&ndash; हुण्डी कारोबार गरेको आरोप काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीको घुमुवा पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले प्रहरी हवल्दार धिरेन बिष्टलाई पक्राउ गरेको हो । विष्ट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको सादा पोशाकमा खटिने प्रहरी हुन् । एसएसपीले सादा पोशाकमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र खटाउँछन् । यस्तै बिष्टसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालको २...
सामाजिक संजाल प्रयोग गरी ठग्नी गर्ने ७ जना प्रहरीको फन्दामा
काठमाडौं&ndash; भाइबर, ह्वाट्स एप, ईमो आदि सामाजिक संजाल प्रयोग गरी करोडौं रकम ठगी गरेको अभियोगमा ७ जनालाई मंगलबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं महानगरपालिका&ndash;२१ कोहिटी बस्ने झापाभद्रपुर नगरपालिका घर भएका २४ वर्षीय पुकार बर्मा, काठमाडौं टेकु बस्ने काभ्रे घर भएका २२ वर्षीय नविन भण्डारी, काठमाडौं टंकेश्वर बस्ने...